အားထုတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆေးဝါးဗေဒ - dopamine, adenosine နှင့်ကျော်လွန်သော (2012) - Your Brain On Porn
ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူများ၏အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ: dopamine, adenosine နှင့် (2012) ကျော်လွန်
J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 2012 Jan;97(1):125-46. doi: 10.1901/jeab.2012.97-125.
Salamone JD1, ကော်ရဲရားက M, Nunes EJ, Randall PA ဆိုပြီး, Pardo M က.
နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ dopamine (DA) ကူးစက်မှုကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောဆေးများသည်အစားအစာကဲ့သို့သောမူလအားဖြည့်ဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ mesolimbic DA ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောသုတေသနနှင့်သီအိုရီသည်ရိုးရာအစဉ်အလာအားဖြင့် hedonia အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အခြားအယူအဆများနှင့်စုံစမ်းမှုလိုင်းများအားအလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုနှင့်အတူသိသိသာသာအယူအဆပြောင်းလဲခြင်းကိုခံနေရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်နျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအားထုတ်မှု -related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအတွက် DA accumbens အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးမူဘောင်မှကြည့်လျှင် DA-depletions နှင့်အစားအစာအားဖြည့်သည့်အပြုအမူအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အဓိကကျသောလုပ်ငန်းတာဝန်၏အလုပ်လိုအပ်ချက်အပေါ်များစွာမူတည်သည်။ DA - ကုန်ခမ်းသည့်ကြွက်များသည်အထူးသဖြင့်အချိုးလိုအပ်ချက်များကိုတုန့်ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာပြသသည်။ ထို့အပြင် accumbens DA transmission နှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသည်အားထုတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောရွေးချယ်မှုအပြုအမူအပေါ်အားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ DA နိမ့်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သည့်ဆန့်ကျင်မှုရှိသည့်ကြွက်များသည်တုန့်ပြန်မှုလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောစားနပ်ရိက္ခာအားဖြည့်လုပ်ငန်းများမှဝေးကွာသောသူတို့၏အပြုအမူများကိုပြန်လည်နေရာချထားပြီးအားဖြည့်မှုနည်းခြင်း၊ Nucleus သည် DA နှင့် adenosine accumbens အားထုတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အခြား ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ (anterior cingulate cortex, amygdala, ventral pallidum) ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ အားထုတ်မှု -based ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းညှိ ဦး နှောက်စနစ်များ၏လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနားလည်ရန်, ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါနှေးကွေး, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်နာကျင်မှုအဖြစ်ရောဂါလက္ခဏာတွေနားလည်မှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
keywords: dopamine, adenosine, အားထုတ်မှု, အလုပ်, အားဖြည့်, အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒ, ပြန်လည်သုံးသပ်
ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ရှိထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, ရေ, လိင်နှင့်အခြားအခြေအနေများအဖြစ်သိသာလှုံ့ဆော်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များမတူညီကြပြီးရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်. ဦးနှောက်ယန္တရားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသုတေသနလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပါဝင်သောဆာပသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်နိုင်ခြေ, နီးကပ်နှင့်သိသာထင်ရှားသောလှုံ့ဆော်မှုများရရှိနိုင်မှုထိန်းညှိကြောင်းအပြုအမူများဝယ်ယူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုပြီးသားဝယ်ယူနေကြသည်ကိုပင်လျှင်, မျိုးစုံအချက်များပေးထားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်အထူးသဖြင့်ဆာပအပြုအမူတွေ၏ရွေးချယ်ရေးမှကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရှုပ်ထွေးပြီးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, သက်ရှိပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့အရည်အသွေး, အရေအတွက်နှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားနိုင်သည့်မျိုးစုံစစ်ကူဖို့လက်လှမ်းရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကွဲပြားဆာပလုပ်ရပ်များအထူးသဖြင့်စစ်ကူနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်, ဤလုပ်ရပ်များမြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်တုန့်ပြန်လိုအပ်ချက်များကိုများ၏အရေအတွက် features တွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ တုန့်ပြန်-အားဖြည့်ကိုက်ညီခြင်း, အကောင်းဆုံး forage သီအိုရီများနှင့်အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းအပါအဝင်အမူအကျင့်သိပ္ပံစုံစမ်းရေးအများအပြားဒေသများ, ဤရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာ (လေ့လာရွေးချယ်မှုအပြုအမူလက္ခဏာနိုင်ရန်အတွက်ပေါ်ထွက်လာပါပြီAllison, 1981, 1993; Aparicio, 2001, 2007; Baum, 1974; Hengeveld, ဗန် Langevelde, Groen, & က de Knegt, 2009; Hursh, Raslear, Shurtleff, Bauman, & Simmons, 1988; Madden, Bickel, & Jacobs, 2000; Madden & Kalman, 2010; Salamone, 1987; Tustin, 1995; Vuchinich နှင့်ဟဲလ်, 2003; ဝီလျံ, 1988) ။ ဤသည်သုတေသနပြုအားဖြည့်တန်ဖိုးကိုအဖြစ်တုန့်ပြန်လိုအပ်ချက်များကို, မျိုးစုံအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုဖြတ်ပြီးဆာပအပြုအမူများ၏ဆွေမျိုးခွဲဝေသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့ချဉ်းကပ်မှုပေးလျက်ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်ဤကျယ်ပြန့်ကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှုထောင့်များ၏အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒအပေါ်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါလိမ့်မယ် perspectives ။ အလှနျဆာပအပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းတစ်ခုမှာတုံ့ပြန်မှု-related အချက်အလုပ်-related တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ် (ဖြစ်ပါတယ်Foltin 1991; Hursh et al ။ , 1988; Kaufman 1980; Kaufman, Collier, Hill, & Collins, 1980; က Madden et al ။ , 2000; Salamone, 1986, 1987, 1992; Staddon 1979; Tustin, 1995) ။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် dopamine (DA) ဂီယာနှင့်မည်ကဲ့သို့သောဤသက်ရောက်မှုအစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူအပေါ်သို့ချမှတ်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်များကို, အထူးသဖြင့်အချိုးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိခိုက်စေသည်ဟု neurochemical ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုအပျေါမှာအာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ဆောင်းပါးနျူကလိယ accumbens အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာ၌ DA ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်အလေးပေးအတူကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နျူကလိယအကြားအပြန်အလှန် DA နှင့်အခြား neurotransmitters နှင့်ဦးနှောက်ဧရိယာများဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည် accumbens, ဤတွေ့ရှိချက်များ၏ကျယ်ပြန့်ဆက်စပ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
DA ရန်များ၏ယူဆချက် Action: DA function ရဲ့ "ဆုခမြ" hypothesis ကျဆင်းမှုလဲ
DA ၏တွေးဆအပြုအမူ functions များ, အထူးသဖြင့်နျူကလိယ accumbens DA နှင့်ဆက်စပ်သောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာသီအိုရီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ ဆာတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေ၏အလုပ်-related ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစဉ်းစားရန်အလို့ငှာ, တဦးတည်း DA ၏အခြားယူဆချက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှဆွေမျိုးတစ်ဦးသမိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်သို့, ဤအတွေးအခေါ်များကိုနေရာချသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါးသို့မဟုတ်ဖျန်ဖြေသို့မဟုတ်အပြုသဘောအားကောင်းဖြစ်ရပ်မောင်းကြောင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစားချင်၏ခံစားချက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဟုပြောသည်ခဲ့သည့်တစ်ဦး "ဆုလာဘ်" transmitter ကို, အဖြစ် DA တံဆိပ်ကပ်ဖို့အမူအကျင့်မှ neuroscience စာပေအတွက်ဘုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (အယူအဆရေးရာန့်အသတ်နှင့်ပင်ကိုယ်မူလပြဿနာများ "ဆုလာဘ်" ၏အစဉ်အလာ DA အယူအဆနှင့်အတူရှိတယ်လို့အများအပြားစုံစမ်းစစ်ဆေးထင်ရှားဖြစ်လာခဲ့ပါသည်Baldo & ကယ်လီ, 2007; Barbano & Cador 2007; Salamone, Correa, Farrar, & Mingote, 2007; Salamone, Correa, Farrar, Nunes, & Collins, 2010; Salamone, Correa, Mingote, & Weber, 2005; Salamone, ဝမ်းကွဲ, & Snyder, 1997; Salamone, et al ။ , 2009), ဟူသောဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" သူ့ဟာသူ (၏အသုံးပြုမှုသည်မဟုတ်အနည်းဆုံးရာCannon & Bseikri 2004; Salamone 2006; Salamone et al ။ 2005; Sanchis-Segura & Spanagel, 2006; Yin, Ostlund, & Balleine, 2008) ။ သူတို့တစ်တွေအမူအကျင့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည့်အခါယင်းဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" မရှိသလောက်သုတေသီများအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ အခြားသူများကို "အစာစားချင်စိတ်" သို့မဟုတ် "မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု" ကိုရည်ညွှန်းအတွက်အသုံးပြုရန်စဉ်က "အားဖြည့်" အတွက်တစ်ဦးတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဖြစ်တချို့ကဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုပါ။ တချို့ကလည်း "အပျော်အပါး" တစ်ကျဲပါးဖုံးအုပ်လျက်ရှိတံဆိပ်အဖြစ်ဤဝေါဟာရကို employ ။ များစွာသောအမှုများမှာစကားလုံး "ဆုလာဘ်" conditional သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်မရှိဖြစ်စေ, အားဖြည့်သင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်မှတကမ္ဘာလုံးကိုရည်ညွှန်းကြောင်းမဟုတ်ဘဲ monolithic, All-လွှမ်းခြုံအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ပုံရသည်။ ဒီထုံးစံများတွင်အသုံးပြုလျှင်, ဝေါဟာရကိုဆုလာဘ်လက်တွေ့ကျကျအနတ္တဖြစ်သကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သည်။ ဒါဟာတစ်ဦး neurotransmitter လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးနေမကောင်း-သတ်မှတ်ထား mediates ကြောင့်ထိန်းသိမ်းထားသောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ခက်ခဲကြောင်းထင်ရှားဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်အဲဒါကိုစည်းကမ်းချက်များဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်အကြားခြားနားထိန်းသိမ်းထားဖို့အကျိုးရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်; ဒီအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအားဖြည့် (ဆာသင်ယူမှုယန္တရားများပိုပြီးတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းသည်Sanchis-Segura & Spanagel, 2006; ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု 2004), ဆုလာဘ်အားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏မူလတန်းစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ connote လေ့နေစဉ် (Everitt & Robbins, 2005; Salamone et al ။ , 2005, 2007).
ဤအ lexicographical နှင့်အယူအဆရေးရာကိစ္စများအပြင်, ထို့အပြင် "ဆုလာဘ်" ၏ DA အယူအဆများ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုထောကျပံ့ဖို့ပျက်ကွက်ရာမကြာသေးမီနှစ်များတွင်စုဆောင်းထားပြီးကြောင်းပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိ။ တဦးတည်းမထင်မှတ်လေ့လာရေးအများဆုံးတိုက်ရိုက်အသုံးအနှုန်းဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာ, ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါး, မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု) ၏အသုံးပြုမှုကိုဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (DA စနစ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသရုပ်ပြ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများဆုံးပြဿနာဖြစ်သရုပ်ပြခဲ့ကြကြောင်းသူများဖြစ်ကြ၏ဖြစ်ပါတယ်Salamone et al ။ , 2007) ။ ဥပမာ, စိတ်ကူးကြောင်းနျူကလိယ DA အပြုသဘောစစ်ကူတွေနဲ့ဆက်စပ်ဘာသာရပ်အစီရင်ခံအပျော်အပါးပြင်းပြင်းထန်ထန် (စိန်ခေါ်လျက်ရှိသည် mediates accumbensBerridge, 2007; Berridge & Kringlebach, 2008; Salamone et al ။ , 2007) ။ accumbens DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက် sucrose အဘို့အစာစားချင်စိတ်ကိုအရသာ reactivity ကိုအယှက်မပေးပါဘူး (Berridge, 2007; Berridge & Kringlebach, 2008), အရာကြွက်များတွင် hedonic reactivity ကိုတစ်မကြာခဏအသုံးပြုအပြုအမူအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ လူ့လေ့လာမှုများ (DA ရန်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ဘာသာရပ် rated Euphoria ပီတိတုံးရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြBrauer & de Wit, 1997; Gawin, 1986; Haney, ရပ်ကွက်, Foltin, & Fischman, 2001; Nann-Vernotica, Donny, Bigelow, & Walsh, 2001; Venugopalan et al ။ , 2011; Wachtel, Ortengren, & de Wit, 2002).
ထိုမှတပါး, ဆာပအပြုအမူသို့မဟုတ်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက် DA စနစ်များ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအပြုသဘောအားကောင်းနှငျ့ပတျသကျသောအခြေအနေများမှကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ အဲဒီမှာယေဘုယျအားဖြင့် striatal ယန္တရားများကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ပြီး, နျူကလိယအထူးသဖြင့် DA accumbens လည်းဆန္ဒရှိသင်ယူမှု, ပြစ်ဒဏ်နှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (မှတုန့်ပြန်၏ရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်Blazquez, Fujii, Kojima, & Graybiel, 2002; Delgado, Li, Schiller, & Phelps, 2008; Faure, Reynolds က, ရစ်ချတ်, & Berridge, 2008; Martinez, Oliveira, Macedo, Molina, & Brandao, 2008; Munro & Kokkinidis, 1997; Salamone, 1994) ။ လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနျူကလိယ accumbens ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါး (ဥပမာ mediates သောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုနေကြသော်လည်း Sarchiapone et al ။ , 2006), အခြေအနေက (အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးPizzagalli, 2010); အမှန်ပင်, အမျိုးမျိုးသောပုံရိပ်နည်းလမ်းများအလုပ်သမားသုတေသနလူ့နျူကလိယစိတ်ဖိစီးမှု, မနှစ်သက်မှုနှင့် hyperarousal / စိတ်တိုတာတွေ (တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း accumbens ကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ်Delgado et al ။ , 2008; Delgado, Jou, & Phelps, 2011; Jensen et al ။ , 2003; Levita et al ။ , 2009; Liberzon et al ။ , 1999; Pavic, 2003; ဖန် et al ။ , 2004; Pruessner, ရှန်ပိန်, Meaney, & Dagher, 2004) ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက် Neurochemical နှင့်ဇီဝကမ္မလေ့လာမှုများရှင်းလင်းစွာ DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုရိုးရှင်းစွာမူလတန်းအပြုသဘောစစ်ကူများပေးပို့နိုင်ရန်ချည်ထားမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အစားအသောက်အားဖြည့်ပတျသကျလေ့လာမှုများအတွက်, DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာဆာပတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ, ဒါမှမဟုတ် conditional လှုံ့ဆော်မှု (စစ်ကူရရှိနိုင်မှုထက်အားဖြည့်ဖြန့်ဝေအချက်ပြRoitman, Stuber, Phillips, Wightman, & Carelli, 2004; Segovia, Correa & Salamone, 2011; Sokolowski, Conlan, & Salamone, 1998) ။ ထိုမှတပါး, DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုနဲ့ DA လွှတ်ပေးရန်ကွဲပြားခြားနားသောဆန္ဒရှိ (ဥပမာ footshock, tailshock, အမြီးအဖြစ်တော့, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု, ဆန္ဒရှိ conditional လှုံ့ဆော်မှု, ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများ, လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု) နှင့်အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများ (တစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့် activated နိုင်ပါသည်Anstrom & Woodward 2005; Brischoux, Chakraborty, Brierley, & Ungless, 2009; Broom & Yamamoto 2005; Guarraci & Kapp 1999; Marinelli, Pascucci, Bernardi, Puglisi-Allegra, & Mercuri, 2005; McCullough & Salamone, 1992; McCullough, Sokolowski, & Salamone, 1993; Schultz 2007a, 2007b; လူငယ်တို့, 2004) ။ ဤရွေ့ကား neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်သူများ, နှေးကွေးနေ phasic နှင့်အစာရှောင်ခြင်း phasic အပြောင်းအလဲများကိုအပါအဝင် (ကွဲပြားအချိန်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရှုမြင်ကြသည်; Hauber 2010; Roitman et al ။ , 2004; Salamone 1996; Salamone et al ။ 2007; Schultz 2007a, 2007b; စီဂိုဗီယာ et al ။ , 2011) ။ သင်ယူမှု၏လေ့လာရေးဥပမာ (အထူးသဖြင့်ယေဘုယျနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် DA စနစ်များကိုသာအားဖြည့်ဖို့ဆက်စပ်သင်ယူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ ပညာရှိ 2004), ဒါပေမယ့်လည်းပြစ်ဒဏ်မှဆက်စပ်သင်ယူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် (Salamone et al ။ , 2007; Schoenbaum & Setlow, 2003) ။ ထို့ကြောင့်က (ထိုဝေါဟာရကို "ဆာပသင်ယူမှု" သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် DA ၏ယူဆချက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြဘို့ကပိုကျယ်ပြန့် "အားဖြည့်သင်ယူခြင်း" ထက်သက်ဆိုင်သောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုထားသည်Salamone et al ။ , 2007).
DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအမှန်တကယ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြည့်များ၏အခြေခံဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်သည်ဆိုပါကဤတစျခုသောသူတို့အားဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်အရာကိုအဖြစ်ကိုမေးလြှောကျလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အားဖြည့်မယ့်အထူးသဖြင့်အပြုအမူကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ပြုမူကြောင်းအမူအကျင့်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ရည်ညွှန်း; အပြုသဘောအားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံမှန်အားဖြင့်ကြောင်းတုန့်ပြန်အပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါသည်, ဤဖြစ်ရပ်များအနာဂတ်တွင်ကြောင်းတုန့်ပြန်၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုတိုးလာသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောအားဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သျောလညျး, တကစစ်ကူအဖြစ်ပြုမူရန်လှုံ့ဆော်မှုကို enable သောအရာကိုဂုဏ်သတ္တိများစဉ်းစားရန်ကျိုးနပ်သည်။ မကြာခဏမှတ်ချက်ချပါသည်အတိုင်း, Skinner မကြာခဏသူတို့ကိုစစ်ကူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အရေးပါသောလက္ခဏာများဆွေးနွေးရန်ခဲ့ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Skinner, အခါသမယတွင်, ထိုကဲ့သို့သောအားဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့အဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုး variable တွေကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပေ။ ဥပမာ, Skinner (1953) "အားဖြည့်အရှင်သင့်လျော်သောဆင်းရဲချို့တဲ့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အပြုအမူဆောင်တတ်၏ဖော်ပြခဲ့သည်။ ခိုတစ်ကောင်အားအစားအစာနှင့်အားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့်လည်ပင်းကိုဆန့်ရန်ခိုကိုအေးစက်စေပြီးနောက်လည်ပင်းဆန့်သောထိန်းချုပ်မှုကိုအစားအစာချို့တဲ့စေသည်” (စ။ ၁၄၉) ။ အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအများကဤပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပြီး၊ ကွဲပြားသောသုတေသနareasရိယာများတွင်ထင်ရှားသောထင်ရှားသောလက္ခဏာများရှိကြောင်းငြင်းခုံခဲ့သည် (Salamone & Correa, 2002) ။ အားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အခြေခံလက္ခဏာများအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားကြသူစုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်အမြောက်အများအဖြစ်အပြုသဘောစစ်ကူပြုမူကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအတော်လေးနှစ်သက်ခံရဖို့လေ့, ဒါမှမဟုတ်ချဉ်းကပ်အပြုအမူထုတ်ယူနိုင်ရန်, ဤသက်ရောက်မှုအပြုသဘောအားကောင်း၏အခြေခံရှုထောင့်များမှာကြောင်းကိုနိဂုံးမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ ။ ဥပမာ, Tapp (1969) “ အရိုးရှင်းဆုံးအဆင့်တွင်အားဖြည့်သူများသည်သက်ရှိများ၏အပြုအမူကိုညွှန်ပြနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ချဉ်းကပ်လာကြသောထိုလှုံ့ဆော်မှုများကိုအပြုသဘောဖြင့်အားဖြည့်သည်ဟုမှတ်ယူကြသည် (စ။ ၁၇၃) ။ Reinforcers များသည်ဝယ်လိုအားရှိသောကုန်စည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုနှစ်သက်သော၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ခြင်းခံရသောလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်ဖော်ပြထားသည် (Dickenson & Balleine, 1994; Hursh et al ။ , 1988; Lea, 1978; Premack, 1959; Staddon & Ettinger, 1989; Timberlake, 1993; Tustin, 1995; Salamone & Correa, 2002) ၏ "အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပင်ကိုယ်မူလနိယာမ၏စိတ်ခွန်အားနိုးထမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ" ၏ဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ။ ကကမ်းလှမ်းသောအမူအကျင့်စီးပွားရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် Hursh (1993) “ တုန့်ပြန်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုသည်စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အဓိကကျသောကြောင့်အရေးပါသောအရေးကြီးသည့်ဒုတိယမှီခိုအားထားရသော variable တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ” (စ။ ၁၆၆)
ဤအကိစ္စတွေကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူဖိနှိပ်ကြောင့် DA ရန်၏အနိမ့်ဆေးများ (အစားအစာဝယ်ယူစားသုံးမှုဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားအပြုအမူထားခဲ့ဖို့ပြသခဲ့ကြကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်Salamone et al ။ , 1991); ဤအထိန်းသိမ်းရေး (အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိFibiger, Carter, & Phillips က, 1976; Ikemoto & Panksepp, 1996; Rolls et al ။ , 1974; Rusk & Cooper က, 1994; Salamone et al ။ , 1991အစားအစာကိုအားဖြည့်ပြင်းအားအပေါ်မှာအခြေခံ), ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်ဦးစားပေး (မာတင် -Iverson, Wilke, & Fibiger, 1987; Salamone, ဝမ်းကွဲ, & Bucher, 1994), နှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ရိုးရှင်းတဲ့ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှု (Salamone 1986) ။ သူကကောင်းကောင်းတပြင်လုံးကို forebrain DA လျော့ကျ (ဆိုလိုသည်မှာစားမရှိခြင်း) aphagia ထုတ်လုပ်နိုင်သောလူသိများသည်သော်လည်းအများစုမှာအဖျားကဒီသက်ရောက်မှုကိုချိတ်ဆက်ခဲ့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သို့မဟုတ် ventrolateral caudate / putamen ၏ sensorimotor နှင့်မော်တာ-related ဒေသများရှိ DA လျော့ကျဖြစ်ပါသည် အစားနျူကလိယ accumbens ထက် (Dunnett & Iversen 1982; Salamone, JD, မဟာ, K. , & ရော်ဂျာ, အက်စ်, 1993; Ungerstedt, 1971) ။ ဆနျ့ကငျြ, နျူကလိယ (DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသိသိသာသာအစားအစာစားသုံးမှုအယှက်မှမထပ်တလဲလဲပြသပြီ accumbensBakshi & Kelley 1991; Baldo, Sadeghian, Basso, & Kelley, 2002; Kelley, Baldo, Pratt, & Will, 2005; Koob, Riley, Smith, & Robbins, 1978; Salamone, Mahon et al ။ , 1993; Ungerstedt 1971) ။ ထို့အပြင်, အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူအပေါ် DA ရန်သို့မဟုတ် accumbens ၏သက်ရောက်မှု DA လျော့ကျနီးကပ်စွာ (Pre-နို့တိုက်ကျွေးရေးသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူကြဘူးAberman & Salamone, 1999; Salamone, Arizzi, Sandoval, Cervone, & Aberman, 2002; Salamone et al ။ , 1991; နစ်မြုပ်, Vemuri, Olszewska, Makriyannis, & Salamone, 2008) ။ ထို့ကြောင့်စစ်ကူမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်အဓိကအားဖြည့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အခြေခံရှုထောင့် DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ် accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက်နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
က "ဆုလာဘ်-related" DA ရန်၏အနိမ့်ဆေးများ၏လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်နျူကလိယ DA လျော့ကျနီးကပ်စွာသုဉ်း (ဥပမာတူကြောင်းသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်သင့်ပါတယ် accumbens ကြောင်းအကြံပြုထားပြီးဖြစ်သော်လည်း Beninger et al ။ , 1987; ပညာရှိ, Spindler, က de ကျေး, & Gerberg, 1978), ဒီအယူအဆတွေနဲ့တော်တော်များများပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ DA ရန်အားဖြင့်သွေးဆောင်တုံ့ပြန်အတွက်အတွင်း-session တစ်ခုကျဆင်းမှု "သုဉ်း" အမည်တပ်ထားသောခဲ့ကြသော်လည်းအလားတူသက်ရောက်မှု Parkinson ၏မော်တာရောဂါလက္ခဏာတွေမြင်ကြသည်။ Haase & Janssen (1985) neuroleptic- သွေးဆောင် Parkinson နှင့်အတူလူနာအားဖြင့်ပြသ micrographia အရေးအသား session တစ်ခုအတွင်းတိုးတက်သောပိုဆိုးလာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းလေ့လာသည်။ သူတို့က“ ပိုစန်မှပိုစန်သည်အထိစာအရေးအသားကိုကျဉ်းမြောင်းစေခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ထူးခြားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စာအရေးအသားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောtheရိယာသည်ပိရမစ်ပုံသဏ္assာန်ကိုယူသည်” (p ၄၃) ။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများလည်း neuroleptic- သွေးဆောင်ပါကင်ဆန် (စ။ 43) နှင့်အတူလူနာများတွင်လက်ချောင်းနှိပ်၏ပြင်းထန်မှုယေဘုယျအားဖြင့်တစ် ဦး session တစ်ခုအတွင်းလျော့နည်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အလားတူစွာပါကင်ဆန်လူနာများသည်မိမိတို့လက်ကိုထပ်ခါတလဲလဲဖိအားပေးနေသည့်လူနာများသည်မော်တာထုတ်လုပ်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာစေသည်။Schwab, 1972) ။ ကြွက်များတွင် DA ရန် (တုန့်ပြန်တဲ့ကြာချိန်အတွက်အတွင်း-session ကိုတိုးမြင့်စေLiao & Fowler, 1990), နှင့်လှကျြအင်အားသုံးအတွက် session ကိုလျှော့အတွင်း (Das & မုဆိုး, 1996) နှင့်ရွေ့လျား (Pitts & Horvitz, 2000) ။ ထို့အပြင်ကြွက်မှ DA ရန်၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေး (အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီး catalepsy တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေတွင်-တိကျတဲ့ာင်းမှဦးဆောင်Amtage & Schmidt က, 2003) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အတော်ကြာလေ့လာမှုများတိုက်ရိုက် DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပွီ, ဤအခြေအနေများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြAsin & Fibiger, 1984; Evenden & Robbins, 1983; Faustman & Fowler, 1981, 1982; Feldon & Winer, 1991; Gramling, မုဆိုး, & Collins က, 1984; Gramling, မုဆိုး, & Tizzano, 1987; Rick, Horvitz, & Balsam, 2006; Salamone 1986; Salamone, Kurth, McCullough, & Sokolowski, 1995, Salamone, et al ။ , 1997; Spivak & Amit, 1986; Willner, Chawala, Sampson, Sophokleous, & Muscat, 1988; Wirtschafter & Asin, 1985) ။ ဥပမာ - Evenden & Robbins ကတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချသောα-flupenthixol (0.33-0.66 mg / kg) သည်ဆေးများနိမ့်ကျခြင်းသည် win-stay / loss-shift အလုပ်အပေါ်တုံ့ပြန်သည့်ကြွက်များတွင်မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်တူသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမပြခဲ့ပါ။ Rick et al ။ မျိုးသုဉ်းခြင်းသည် D1 ၏ရန်လိုသော SCH 23390 သို့မဟုတ် D2 ရန်ငြိုးထားသည့် raclopride နည်းသောဆေးများကိုလေ့ကျင့်ရန်လေ့ကျင့်ထားသည့်ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုကိုတိုးမြှင့်စေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဒီစာပေကနေနောက်ထပ်ဥပမာဖြစ်ပါတယ် Salamone (1986)DA DA antagonist haloperidol ၏ ၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၏သက်ရောက်မှုများသည်ကြွက်များတွင်မျိုးသုဉ်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အားဖြည့်ခြင်း ၂၀ အစီအစဉ်ဇယားအပေါ်သိသိသာသာကွဲပြားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ မျိုးသုဉ်းမှုအောက်၌, haloperidol နဲ့ကုသတဲ့ကြွက်များထက်, session ရဲ့အစမှာကြွက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားများမှာတုန့်ပြန်, haloperidol- ကုသကြွက်တစ်ခု "မျိုးသုဉ်းပေါက်ကွဲမှု" မပြခဲ့ဘူးကြောင်းပြသ Salamone et al ။ , 2005, accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက်အမှန်တကယ်သုဉ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ကိုဆနျ့ကငျြဘ၌, session တစ်ခု၏အစတွင်ပိုမိုနှေးကွေးစွာတုံ့ပြန်ထွက်စတင်ပြသရာ။ ထိုမှတပါး, မျိုးသုဉ်းထိတွေ့ကြွက် (အချိုးကျ haloperidol-ကုသတိရစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာယခင်အခြေခံတုံ့ပြန်မှုနှုန်းထက်ပိုမြန်ခဲ့ပိုပြီးအချိုးထုတ်လွှတ်Salamone, 1986) ။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် FR 0.1 တုန့်ပြန်မှုအပေါ် 20 mg / kg haloperidol ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆေးပမာဏသည်အရွယ်အစားလေးဆသည်သတ်မှတ်ထားသောကြားကာလတွင်အစားအစာဟင်းပွဲနှင့်နီးကပ်စွာနေခြင်း၏အားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အချိန်ဇယား (Salamone, 1986) ။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အစားအစာ-အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ် DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းသိသိသာသာပုနျဆာပတုံ့ပြန်မှုနှိမ်နင်းရာမျိုးသုဉ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှသိသိသာသာမတူဘဲဆိုလိုတာပါ။ ဒီတူညီတဲ့စမ်းသပ်မှုများတွင်အချိန်ဇယား-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအစားအသောက်ပန်းကန်မှနီးကပ်အတွက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆာပတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့အပြိုင်တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည်။ ၏အထက် panel ကမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံ 1, 0.4 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် haloperidol အစားအစာစီစဉ်ထားတင်ဆက်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်ပေမယ့်, အနိမ့် panel ကိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်း haloperidol အဆိုပါအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အခြားလေ့လာမှုများနှင့်ပေါင်းစပ်။ ဤရလဒ်သည် DA ရန်ဘက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ပထမ ဦး စွာ DA ရန်လိုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများသည်ကျယ်ပြန့်သောအခြေအနေများတွင်မျိုးသုဉ်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အနီးကပ်မတူပါ (Salamone et al ။ , 1997) ။ ဒုတိယအချက်မှာ DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအချိန်ဇယား-သွေးဆောင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုနှိမ်နင်း; အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ (စစ်ကူများစီစဉ်ထားပေးပို့ဂုဏ်သတ္တိများကိုသက်ဝင်ကြပါပြီနိုင်သည်ကိုပြသကြKilleen, 1975; Killeen, Hanson, & Osborne, 1978), နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် accumbens DA လျော့ကျအချိန်ဇယား-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုများကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြMcCullough & Salamone, 1992; Robbins & Everitt, 2007; Robbins & Koob, 1980; Robbins, Roberts သည်, & Koob, 1983; Salamone 1988; Wallace, အဆိုတော်, Finlay, & Gibson, 1983) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ (ဤရလဒ်များကိုဆာပအပြုအမူအပေါ် DA ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများဆာပတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအားကောင်းအပြန်အလှန်ကြောင်းညွှန်ပြသက်သေအထောက်အထားများ၏ကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကိုက်ညီ ရှိ. , အချို့အားဖြည့်အပြုအမူတွေကို DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အတော်လေးထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းEttenberg et al ။ , 1981; Mekarski, 1988).
ဒါကကိန်းဂဏန်း re-ရေးဆွဲရာမှဒေတာများအပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ် Salamone (1986)။ ကြွက်များကိုကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုခန်းမတစ်ခုတွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးအစားအစာပန်းကန်၏ရှေ့မှောက်၌ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ရှိနေရန် FI-45 sec အချိန်ဇယားတွင် ၄၅ မီလီဂရမ်အစာတောင့်များနှင့်အားဖြည့်ထားသည်။ Locomotor ...
တန်ဆာတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ACCUMBENS DA လျော့ကျ interactive ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါ 1970s ထံမှ 1990s ရန်, အထက်ဖော်ပြထားတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူအပြိုင်ခုနှစ်, ကြိုးစားအားထုတ်မှု, တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်န့်အသတ်နှင့် operating အပြုအမူ၏စီးပွားရေးမော်ဒယ်ပေါ်အပြုအမူစာပေအတွက်ထွန်းသစ်စအလေးပေးရှိ၏။ အများအပြားကစုံစမ်းစစ်ဆေး (တုန့်ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်သတ်အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှု output ကိုထိခိုက်ပုံကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်Foltin 1991; Kaufman 1980; Kaufman et al ။ 1980; Staddon 1979; Tustin, 1995) ။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာရယူဘို့လိုအပ်သောလီဗာပုံနှိပျ၏နံပါတ်အဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်, (ဆာတုံ့ပြန်မှု output ကို၏ဆုံးအဖွတျအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်လည်းအစားအစာစားသုံးမှုကိုထိခိုက်ပြခဲ့ကြCollier & Jennings, 1969; ဂျွန်ဆင် & Collier 1987) ။ (အပြုအမူစီးပွားရေးမော်ဒယ်များကိုသာအားဖြည့်တန်ဖိုးကိုအပါအဝင်အချက်များစွာ၏ပုံကိုနံပါတ်, အလေးပေး, ဒါပေမယ့်လည်းဆာပတုံ့ပြန်မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများ, အမူအကျင့် output ကိုဆုံးဖွတျနိုငျAllison, 1981, 1993; Bickel, Marsch, & ကာရိုး, 2000; Lea, 1978). Hursh et al ။ (1988) တစ်ဦးကုန်စည်အဖြစ်အစားအစာအားဖြည့်များ၏စျေးနှုန်းကိုလောင်အစားအစာတန်ဖိုးတစ်ယူနစ်အသုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကုန်ကျ / အကျိုးအတွက်အချိုးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများ DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်များ၏သက်ရောက်မှုများဆာပတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအားကောင်းအပြန်အလှန်သောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုအားကောင်းလာစေရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါပြီ။ တစ်ဦးအော်ပရေတာအချိန်ဇယားထဲမှာအလုပ်လိုအပ်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ထား၏နည်းလမ်းများတစ်ခုမှာအမျိုးမျိုးသောအချိုးအချိန်ဇယားသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုံးသောအမြှေးများနှင့် Brindle (2001) အစားအစာ-အားဖြည့်အပြုအမူအပေါ် DA ရန် haloperidol ၏သက်ရောက်မှုတစ်ဦး FR 1 အချိန်ဇယားတစ်ခုတိုးတက်သောအချိုးထက်လျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, အချိုးလိုအပ်ချက်အပျေါမှီခိုခဲ့လေ့လာသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သော 6-hydroxydopamine အဖြစ် neurotoxic ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ဒေသခံထိုးခြင်းဖြင့် accumbens DA ပျက်ဆီးနိုင်ပြီး, အတော်ကြာလေ့လာမှုများကဒီချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ Aberman နှင့် Salamone (1999) accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အချိုးအချိန်ဇယား (FR 1, 4, 16 နှင့် 64) ၏အကွာအဝေးအလုပ်။ FR 1 စွမ်းဆောင်ရည် DA လျော့ကျကြောင့်ထိခိုက်မခံခဲ့ရပေမယ့် (ကိုလညျးရှု Ishiwari, Weber, Mingote, Correa, & Salamone, 2004), နှင့် FR4တစ်ခုသာပျော့နှင့်ယာယီဖိနှိပ်မှုပြသခဲ့သည်တုံ့ပြန်ခြင်း, FR 16 နှင့် FR 64 အချိန်ဇယားအများကြီးပိုချို့ယွင်းခဲ့သညျ။ ဒီပုံစံကြောင့် DA လျော့ကျအချိုး strain ၏ induction ရာထူးတိုး accumbens ညွှန်ပြ; ကြောင်း accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက်ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့အချိုးလိုအပ်ချက်၏အရွယ်အစားခဲ့သည်။ ဒီပုံစံအစားအသောက်အားဖြည့်ဝယ်လိုအား၏ elasticity တစ်ခုတိုးထင်ဟပ်အဖွစျဖျောပွနိုငျ (Aberman & Salamone 1999; Salamone et al ။ , 1997, 2009) ။ အချိုးလိုအပ်ချက်အတွက်ကုန်စည် (အားဖြည့်လုံးလေးများ) ၏စျေးနှုန်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်ဆိုပါက accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက် (အစာအာဟာရကိုစစ်ကူများစျေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာသောပုံ 2) ။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ကြွက်အော်ပရေတာလုံးလေးများဝယ်ယူရန်ငွေကြေးအသုံးမကြဘူး။ အဲဒီအစားသူက (တစ်ဦး operating လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ကုန်စည်များအတွက်ကြွက်က၎င်း၏အလုပ် (သို့မဟုတ်အပန်းဖြေအတွက်လျှော့ချ) ကုန်သွယ်မှုအတွက်တစ်ဦးကုန်ဖလှယ်ရေးစနစ်, ပိုမိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်Rachlin, 2003; Tustin, 1995) ။ ထို့ကြောင့် accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက်စားစရာဘို့အချိုး output ကိုမြင့်မားကုန်သွယ်မှုလျော့နည်းဖွယ်ရှိအလုပ်လုပ်-ဆက်စပ်တုံ့ပြန်ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။ တစ်နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုများတွင် Salamone, Wisniecki, Carlson နှင့်ကော်ရဲရား (2001) ကြွက် (FR300 အဖြစ်အဆင့်မြင့်ကဲ့သို့) အချိုးအချိန်ဇယားတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးစမ်းသပ်ပြီးသောအခါ accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက်များတွင်ပိုမိုကြီးမားအချိုးလိုအပ်ချက်များ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်လီဗာစာနယ်ဇင်းနှုန်းကိုအပ်လီဗာဖိနှင့်အစားအစာအကြားအလုံးစုံစပ်လျဉ်းထားရှိမည်ခံခဲ့ရလျှင်ပင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ကြောင်းအစီရင်ခံ စဉ်ဆက်မပြတ် (ဆိုလိုသည်မှာ 50 တစ်ယူနစ်စျေးနှုန်း: တဦးတည်းတောင့်ဘို့အ FR 50; နှစ်ခုလုံးလေးများများအတွက် FR 100; လေးယောက်လုံးလေးများများအတွက် FR 200; ခြောက်လလုံးလေးများနှင့် FR 600) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များပြင်းအားနှင့်အချိုးအစားလိုအပ်ချက်များ၏အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးကို accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုအော်ပရေတာအချိန်ဇယားများ sensitivity ကိုဝေဖန်ဆုံးအဖွတျဖွစျဖို့ပေါ်လာကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဒါကကိန်းဂဏန်းအနေဖြင့်ဒေတာများအပေါ်မှာအခြေခံ (ယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လီဗာထုတ်လွှတ်ပုံနှိပျနှင့် accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက်များတွင်စားသုံးအော်ပရေတာလုံးလေးများ၏နံပါတ်ပေါ်အချိုးလိုအပ်ချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသ Aberman & Salamone, ...
အပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအချိုးလိုအပ်ချက်တစ်ခုကြားကာလလိုအပ်ချက်တွဲခဲ့သည့်အတွက်တွဲဖက်အချိန်ဇယားအပေါ် accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်အားဖြင့်ရလဒ်တွေကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာပြုလေ၏ Aberman နှင့် Salamone (1999) နှင့် Salamone et al ။ (2001) ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကဲ့သို့သောအခြား variable တွေကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်အချိုးအစား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထင်ဟပ်။ အမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ်မှုများနှင့်အတူတွဲဖက် variable-interval (VI) / FR အချိန်ဇယားများကိုအသုံးပြုသောသုတေသန (ဥပမာ - ၃၀ စက္ကန့် / FR30၊ ၆၀ စက္ကန့် / FR5၊ ၆၂ စက္ကန့် / အက်ဖ်အက်စ် ၁၀) သည်ပုံစံတကျဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ accumbens DA depletions သည်သမားရိုးကျ VI အချိန်ဇယားများ (ဆိုလိုသည်မှာကြားကာလနောက်ပိုင်းတွင်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုသာလိုအပ်သူများ) အပေါ်တုံ့ပြန်သောကြွက်များတွင်တုန့်ပြန်မှုအားလုံး ၀ မတားဆီးနိုင်သော်လည်းသက်ဆိုင်ရာ VI အစီအစဉ်တွင်တုန့်ပြန်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးခဲ့သည် (Correa, Carlson, Wisniecki, & Salamone, 2002; Mingote, Weber, Ishiwari, Correa, & Salamone, 2005) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (ကတိုးတက်သောကြားကာလလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အယှက်မပြုခဲ့ accumbens ကြောင်းသုတေသနများနှင့်ကိုက်ညီများမှာWakabayashi, Fields, & Nicola, 2004), နှင့် DA လျော့ကျဝနှောင့်နှေးထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူး accumbens (Winstanley, Theobald, Dalley, & Robbins, 2005) ။ ထို့အပြင် DA ရန် haloperidol (က DRL 72-စက္ကအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်ကြွက်များတွင်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးPaterson, Balci, Campbell, Olivier, & Hanania, 2010) ။ ဤရလဒ်သည်နှုန်း se ကြားကာလလိုအပ်ချက်များကိုနျူကလိယ accumbens အတွက်ညှိ DA ဂီယာနှင့်အတူကြွက်တစ်ဦးပြင်းထန်သတ်ရှိုးမအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကျော်နဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသို့မဟုတ်အချိန်မဆိုအကျိုးသက်ရောက်အထက်, အချိုးလိုအပ်ချက် accumbens DA လျော့ကျသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကြွက်ရန်အလွန်နှောင့်အယှက်သောအလုပ်-related စိန်ခေါ်မှုသည်။
သူတို့အလယ်အလတ်အရွယ်အစားအချိုးလိုအပ်ချက်စပ်လျဉ်း inverted ဦး-shaped function ကို၏ (ဆိုလိုသည်မှာ, အတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုခြေလက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာပေါ်ရှိသည်သောတုံ့ပြန်မှု-တိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ) 1: အကျဉ်းချုပ်ခုနှစ်တွင်နျူကလိယ DA လျော့ကျတုံ့ပြန်အချိုးအစားအပေါ်နှစ်ခုကအဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာ accumbens အချိုးတုံ့ပြန်မှုကို output လိုအပ်ချက်), နှင့် 2) သူတို့ကအရမ်းကြီးမားတဲ့အချိုး function ကို၏ (ဆိုလိုသည်မှာ, အဆင်းခြေလက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာပေါ်ရှိသည်သောတုံ့ပြန်မှု-နှိပ်ကွပ်သက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်, အချိုး strain ၏တိုးမြှင်; Salamone & Correa 2002; Salamone et al ။ , 2001, 2007, 2009) ။ မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအကြောင်းဆွေးနွေးကြသောအခါစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ (အခြေခံနှုန်းကိုအားဖြည့်များ၏အချိန်ဇယားကိုထုတ်ပေးကြောင်းBarrett & Bergman, 2008; Dews, 1976; McMillan & Katz, 2002) ။ အခြေခံတုံ့ပြန်မှုနှုန်းထဲမှာအချိုး strain inducing များအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် Salamone et al ။ (2001) accumbens မှထုတ်လုပ်သောအားဖြည့်သည့်အရာအများအပြား (ပုံသေနှင့်တိုးတက်သောအချိုးအစား၊ ၃၀ စက္ကန့်၊ ၆၀ စက္ကန့်နှင့်တွဲဖက် VI / FR အချိန်ဇယားများ) တွင်တွေ့ရသည့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းလျှော့ချမှုသည်စမ်းသပ်မှု၏အခြေခံတုံ့ပြန်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ ။ ဤအချိန်ဇယားများတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်တုံ့ပြန်မှု၏အခြေခံနှုန်းနှင့် accumbens DA ဖြုတ်ချမှုမှထုတ်လုပ်သည့်ဖိနှိပ်မှုအတိုင်းအတာအကြားမျဉ်းကြောင်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လိုငွေပြမှုသည်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်သောအချိန်ဇယားများအတွက်ပိုမိုများပြားသည် (ပုံ 3) ။ ထို့အပြင်မော်လီကျူးအမူအကျင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ထို interresponse ကပ်ကာလ၏ဖြန့်ဝေအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ, တုံ့ပြန်၏ဒေသခံမှုနှုန်းအနည်းငယ်လျှော့ချထုတ်လုပ်ရန် accumbens ညွှန်ပြMingote et al ။ , 2005; Salamone, Kurth, McCullough, Sokolowski, & ဝမ်းကွဲ, 1993; Salamone, Aberman, Sokolowski, & ဝမ်းကွဲ, 1999ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်အတွက်), အဖြစ်တိုး (Mingote et al ။ , 2005; Salamone, Kurth, et al ။ , 1993; ကိုလညျးရှု Nicola, 2010) ။ တွက်ချက်ချဉ်းကပ်ဥပမာ (အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းအပေါ် accumbens DA လျော့ကျဤသက်ရောက်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်အသုံးပြုခဲ့ကြ Niv, Daw, Joel, & Dayan, 2007; Phillips, Walton, & Jhou, 2007) ။ Phillips က et al ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် DA လွှတ်ပေးရေးဆုလာဘ်ရရှိရန်တံခါးခုံကုန်ကျစရိတ်အသုံးစရိတ်လျော့နည်းသွားသောကာလအတွင်းအခွင့်အရေးယူ drive ကိုတစ်ပြတင်းပေါက်များကိုပုံပေါ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
DA လျော့ကျ (ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို accumbens ထုတ်လုပ်တုံ့ပြန်မှုမှုနှုန်း၏ဖိနှိပ်မှုများ၏ပြင်းအားနှိုင်းယှဉ်အားဖြည့်အမျိုးမျိုးကြားကာလနှင့်အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်၏အခြေခံသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုနှုန်းထားများတို့အကြားဆက်ဆံရေးဖေါ်ပြခြင်း Scatterplot ...
အချိုးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများ၏ဤဆွေးနွေးမှုများ၏အခြေအနေတွင်ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံအချိုးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မူးယစ်ဆေးထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောသောဝေါဟာရကို "အားဖြည့်ထိရောက်မှု" စဉ်းစားရန်အသုံးဝင်သည်။ တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားနှင့်အတူအဆက်ဆက်အချိုးအတိုင်းအချိုးလိုအပ်ချက်တိုးပြီးစီးကြသည်ကို၎င်း, "ချိုးအချက်" ဟုအဆိုပါတိရိစ္ဆာန်တုံ့ပြန်ရပ်မှာအမှတ်မှာဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုပါတယ်။ တဦးတည်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအတွင်းချိုးအချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော FR အချိန်ဇယားကိုဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်ကြွက်များတွင်အချိုး strain တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်အားဖြည့်ထိရောက်မှုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အားဖြည့်ထိရောက်မှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ရပ်များ characterizing အဘို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအတန်း (ဥပမာဖြတ်ပြီး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖွစျစနေို, Marinelli et al ။ 1998; မော်ဂန်, Brebner, Lynch, & Roberts သည်, 2002; ရပ်ကွက်, မော်ဂန်, & ရောဘတ်, 2005; Woolverton & Rinaldi, 2002) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေအထက်တွင်ဆွေးနွေး terminological အခက်အခဲများပေးထားသောကြောင့်ဝေါဟာရကို "အားဖြည့်ထိရောက်မှု" ရိုးရိုး "ဆုလာဘ်" အတွက်တစ်ဦးကိုအစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုမဖြစ်သင့်ကြောင်းနှင့်တိုးတက်သောအချိုး breakpoints အားသေချာပေါက်အချို့တိုက်ရိုက်နှင့်တည်ပြီးသတ်တယ်ပေးအဖြစ်ရှုမြင်မဖြစ်သင့်ကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုမှအသုံးဝင်သည် ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါးနှင့်ပတ်သက်သောအတိုင်းအတာ (Salamone, 2006; Salamone et al ။ , 1997; 2009) ။ တိုးတက်သောအချိုးချိုးအချက်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို (အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဖြစ်စဉ်များအပေါ်လုပ်ရပ်များထင်ဟပ်နိုင်ပါတယ်အာနိုးနှင့်ရောဘတ်, 1997; Bickel et al ။ , 2000; Hamill, Trevitt, Nowend, Carlson, & Salamone, 1999; Killeen, 1995; ချို့တဲ့ဂျုံးစ်, & Roberts သည်, 2008; Madden, Smethells, Ewan, & Hursh, 2007; Mobini, Chiang, Ho, Bradshaw, & Szabadi, 2000) ။ ဥပမာ, လီဗာ၏အမြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်တုန့်ပြန်လိုအပ်ချက်များကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ (တိုးတက်သောအချိုးချိုးအချက်များလျော့နည်းသွားSchmelzeis & Mittleman 1996; Skjoldager, Pierre, & Mittlman, 1993) ။ အချို့သုတေသီများချိုးအမှတ်တစ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အစာစားချင်စိတ်စိတ်ခွန်အားနိုးဝိသေသလက္ခဏာများ၏တိုက်ရိုက်အတိုင်းအတာကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်တစ်ဦးမြေမှတ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်ကကြောင်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြပေမယ့် Stewart က (1975)ပိုပြီးတိုက်ရိုက်သက်ရှိကြောင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွရယူနိုင်ရန်အတွက်ပြုကြလိမ့်မည်ဘယ်လောက်အလုပ်၏အတိုင်းအတာ။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာစစ်ကူသူ့ဟာသူနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များပေါ်တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းအချိုးအချိန်ဇယားကိုချမှတ်အလုပ်-related တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်အခက်အခဲအပေါ်မှာအခြေခံဖြစ်စေမတုံ့ပြန်ဆက်လက်အကြောင်းကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်ရွေးချယ်မှု, အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုတစ်ဦးချင်းစီတာဝန်ဘို့ကိစ္စဖြစ်သင့်တဲ့အတိုင်းဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်, တိုးတက်သောအချိုးချိုးအချက်များအပေါ်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်တွေ့ရှိရပါသည်၏အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ, သတိနဲ့လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ချိုးအမှတ်ပွောငျးလဲသောမူးယစ်ဆေးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အဲဒီလိုနိုင်ဘူး။ Mobini et al ။ , (2000) ကတီထွင်သည့်အရေအတွက်နည်းလမ်းများသုံးပြီးတုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်တော်တော်များများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် Killeen (1994)သူအချိန်ဇယားစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးစုံ variable တွေကို (တိကျတဲ့ activation, နားချင်းဆက်မှီများနှင့်တုန့်ပြန်အချိန်) အကြားအပြန်အလှန်ကြောင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ Mobini et al ။ clozapine ဟာ activation parameter သည်တိုးပွားလာနေချိန်တွင် haloperidol, နှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုအချိန် parameter သည်ထိခိုက်နှင့်လည်း activation parameter သည်လျော့နည်းသွားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများကို (DA ရန် haloperidol တုံ့ပြန်အစားအစာ-အားဖြည့်တိုးတက်သောအချိုးအစားနှင့်အနိမ့်ချိုးအချက်များဖိနှိပ်, ဒါပေမယ့်သို့ရာတွင်တစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်ပေမယ့်ဒီထက်နှစ်သက်သောအစားအသောက်အရင်းအမြစ်များ၏စားသုံးမှုနဂိုအတိုင်းထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းပြသကြPardo et al ။ , 2011; Randall, Pardo, et al ။ , 2011) ။ ဒီတာဝန်အပေါ် haloperidol ဤလုပ်ရပ်များ (ဖိနှိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ prefeeding နှင့်အစာစားချင်စိတ်ကထုတ်လုပ်သူတွေကိုထံမှသိသိသာသာကွဲပြားPardo et al ။ , 2011; Randall, Pardo, et al ။ , 2011).
DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်နျူကလိယ ACCUMBENS DA လျော့ကျအားထုတ်မှု-RELATED Choice task ထဲမှာတုံ့ပြန်ခြင်းတူရိယာ THE ဆွေမျိုးခွဲဝေအပေါ်သက်ရောက်မှု
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ (သူတို့ကိုအားရယူအသုံးပြုမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောလှုံ့ဆော်မှုရယူဘို့မျိုးစုံအခွင့်အလမ်းများကိုတင်ပြကြောင်းရှုပ်ထွေးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်အတော်ကြာခရီး၌ရွေးချယ်မှုများစေရမယ်Aparicio, 2001, 2007; ဝီလျံ, 1988) ။ ဤအရွေးချယ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးသော variable တွေကိုရှုပ်ထွေးပြီး multidimensional ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အားဖြည့်တန်ဖိုးကို, ဒါပေမယ့်လည်းတုံ့ပြန်မှု-related အချက်များသာပါဝင်သည်။ အရေးကြီးဆုံးများထဲတွင်အားထုတ်မှုနဲ့အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုအပေါ်မှာအခြေခံကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက် interaction ကပါဝငျသောသူတို့အားအချက်များ (များမှာHursh et al ။ , 1988; Neill & Justice, 1981; Salamone, 2010a; Salamone & Correa 2002; Salamone, Correa, Mingote, & Weber, 2003; Salamone et al ။ , 2005, 2007; Van den Bos, ဗန် der Harst, Jonkman, Schilders, & Spruijt, 2006; Walton, Kennerley, Bannerman, Phillips, & Rushworth, 2006) ။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (DA ရန်၏အနိမ့်စနစ်တကျဆေးများအဖြစ်နျူကလိယ၏ဒေသခံပြတ်တောက် DA ဂီယာ accumbens, အားထုတ်မှု-based ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအကဲဖြတ်ရန်ကြောင်းတာဝန်များကိုအပေါ်တုံ့ပြန်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အပြုအမူများ၏ဆွေမျိုးခွဲဝေထိခိုက်စေကွောငျးဖျောပွသFloresco, St. Onge, Ghods-Sharifi, & Winstanley, 2008; Floresco, Tse, & Ghods-Sharifi, 2008b; Hauber & Sommer 2009; Salamone et al ။ 2003, 2005, 2007).
တုန့်ပြန်ခွဲဝေအပေါ် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်ရန်အသုံးပြုခဲ့တစ်ခုမှာတာဝန်ကြွက်တစ်ဦးအတော်လေးနှစ်သက်အစားအစာ (ဥပမာ Bioserve လုံးလေးများ; များသောအားဖြင့်တစ်ဦး FR5အချိန်ဇယားအပေါ်ရရှိသော) ၏ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်အားဖြည့်နှိပ်လီဗာ၏ထို option ကမ်းလှမ်းတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် အခနျးထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်သောလျော့နည်းနှစ်သက်သောအစားအသောက် (ဓာတ်ခွဲခန်း Chow) (ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်စားသုံးSalamone et al ။ , 1991) ။ အခြေခံသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များကိုနှိပ်လီဗာအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်အများစုရနှင့် Chow ကသာသေးငယ်တဲ့ပမာဏစားသုံးကြသည်။ : D ဖြစ်စေပိတ်ဆို့ထားတဲ့ DA ရန်၏ low-To-အလယ်အလတ်ဆေးများ,1 သို့မဟုတ်: D2 မိသားစုလက်ခံမှုအမျိုးအစားခွဲများ (cis-flupenthixol, haloperidol, raclopride, eticlopride, SCH 23390, SKF83566, ecopipam) သည်ဤတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်သည့်ကြွက်များတွင်တုန့်ပြန်မှုခွဲဝေမှုကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေသည်။ သူတို့သည်အစားအစာကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးသည့်လီဗာကိုဖိအားကျစေသော်လည်းတပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်သောခရို (ဝမ်းကွဲများ၊ ဝေ၊ Salamone, 1994; Koch Schmid, & Scnhnitzler, 2000; Salamone et al ။ , 2002; Salamone, ဝမ်းကွဲ, Maio, ချန်ပီယံ, Turski, & Kovach, 1996; Salamone et al ။ , 1991; et al နစ်မြုပ်။ 2008; Worden et al ။ 2009).
ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအကဲဖြတ်ဘို့ဤတာဝန်များအသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများစွာအတွက်အတည်ပြုထားသည်။ စားသုံးမှု Chow မှနှိပ်လီဗာအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုကိုထုတ်လုပ်ကြောင်း DA ရန်၏ဆေးများ (စုစုပေါင်းအစားအစာစားသုံးမှုကိုထိခိုက်သို့မဟုတ်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးရွေးချယ်မှုစာမေးပွဲများတွင်ဤနှစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အစားအစာများအကြား preference ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြဘူးKoch et al ။ , 2000; Salamone et al ။ , 1991) ။ ဆနျ့ကငျြ, အစာစားချင်စိတ် (စိတ်ကြွဆေးအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းမှ suppressantsဝမ်းကွဲ et al ။ , 1994), fenfluramine (Salamone et al ။ , 2002) နှင့် cannabinoid CB1 ရန် (စုပ် et al ။ , 2008) ကိုနှိပ်လီဗာနှိမ်နင်းကြောင်းဆေးများမှာ Chow စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်နှစ်ဦးစလုံးလီဗာနှိပ်ပြီး Chow စားသုံးမှုလျှော့ချ prefeeding (Salamone et al ။ , 1991) ။ ထို့အပွငျ, (FR 20, ဒါမှမဟုတ်တိုးတက်သောအချိုးအထိ) မွငျ့မားအချိုးလိုအပ်ချက်, စားသုံးမှု Chow မှနှိပ်လီဗာကနေမူးယစ်ဆေးကုသပြောင်းကုန်ပြီမဟုတ်တိရစ္ဆာန်များ (နဲ့အတူPardo et al ။ , 2011; Randall, Pardo, et al ။ , 2011b; Salamone et al ။ , 1997), ဒီတာဝန်ဝန်လုပ်ကိုင်ဖို့အထိခိုက်မခံကြောင်းညွှန်ပြ။ ဤရလဒ်သည် DA ဂီယာနဲ့နှောင့်ယှက်ရိုးရိုးအစားအစာစားသုံးမှုကိုလျှော့ချပေမယ့်အစားမတူညီတဲ့ဆာပတုံ့ပြန်မှုမှတဆင့်ရယူနိုင်အစားအစာ၏အခြားရွေးချယ်စရာသတင်းရင်းမြစ်များအကြားတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေပြောင်းလဲပစ်ရန်ပြုမူပါဘူးဖော်ပြသည်။
ဒီတာဝန်အပေါ်ဖျော်ဖြေကြွက်များတွင်စားသုံးမှု Chow မှနှိပ်လီဗာကနေပြောင်းကုန်ပြီနျူကလိယ accumbens အတွက် DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏ နှိပ်လီဗာနှင့် Chow စားသုံးမှုအတွက်တိုးမြှင့်အတွက်လျော့ကျ accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်အဖြစ် D ကိုဒေသခံထိုး1 သို့မဟုတ်: D2 နျူကလိယ accumbens ၏တစ်ခုခုကိုအဓိကသို့မဟုတ် shell ကိုငျဒသေသို့မိသားစုရန် (ဝမ်းကွဲ & Salamone 1994; ဝမ်းကွဲ Sokolowski, & Salamone, 1993; Farrar et al ။ , 2010; Koch et al ။ 2000; Nowend, Arizzi, Carlson, & Salamone, 2001; Salamone et al ။ , 1991; Sokolowski & Salamone, 1998) ။ လီဗာကိုနှိပ် accumbens DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ကျခြင်းဖြင့်ယုတ်လျော့နေသည်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်ဤကြွက်အပြုအမူတစ်ခုအစားထိုး reallocation ပြသကာအခြားရွေးချယ်စရာအစားအစာအရင်းအမြစ်အားအသစ်သောလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
Salamone et al ။ (1994) ထို့အပြင်ဝင်္၏နှစ်ခုရွေးချယ်မှုလက်နက်ကွဲပြားခြားနားသောအားဖြည့် DENSITY (ဥပမာလေး vs. နှစ်ခုအစားအစာလုံးလေးများ, ဒါမှမဟုတ်လေး vs. သုည) မှဦးဆောင်ရသောတစ်ဦးသည် T-ဝင်္လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, တီထွင်, အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ဦးအတားအဆီးတစ်ခုအားထုတ်မှု-related စိန်ခေါ်မှုတင်ဆက်ဖို့အစားအစာအားဖြည့်များ၏ပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆနှင့်အတူလက်ရုံးထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးသောသိပ်သည်းဆလက်မောင်းရာဌာန၌အတားအဆီးရှိပါတယ်, နှင့်အတားအဆီးမရှိဘဲလက်မောင်း (နည်းပါးလာစစ်ကူများပါဝင်သည်မြင့်မားသိပ်သည်းဆလက်မောင်းများအတွက် DA လျော့ကျသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကျဆင်းခြင်းရွေးချယ်မှုနှင့်မျှမဆီးတားနှင့်အတူအနိမ့်သိပ်သည်းဆလက်မောင်း၏ရွေးချယ်ရေးတိုးမြှင့်သည့်အခါဝမ်းကွဲ, Atherton, Turner & Salamone, 1996; Denk, Walton, Jennings, Sharp, Rushworth, & Bannerman, 2005; Mott et al ။ , 2009; Pardo et al စာစောင်များအတွက်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ; Salamone et al ။ , 1994).
အော်ပရေတာတွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်လိုပဲ, ဒီကို T-ဝင်္တာဝန်လည်း (စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအပြုအမူ validation ကိုများနှင့်အကဲဖြတ်ခံထားပါတယ်ဝမ်းကွဲ et al ။ , 1996; Pardo et al စာစောင်များအတွက်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ; Salamone et al ။ , 1994; ဗန်တွင်း Bos et al ။ , 2006) ။ ဥပမာအားများအတွက်ဝင်္မရှိအတားအဆီးလည်းမရှိသည့်အခါ, ကြွက်အများစုမြင့်အားဖြည့်သိပ်သည်းဆလက်မောင်းပိုနှစ်သက်နှင့်မ haloperidol မဟုတ်သလို accumbens DA လျော့ကျ (သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်ရွေးချယ်မှုကိုပွောငျးလဲSalamone et al ။ , 1994) ။ ယင်းအတားအဆီးနှင့်အတူလက်မောင်းလေးခုလုံးလေးများပါရှိသောပေမယ့်အခြားလက်မောင်းအဘယ်သူမျှမလုံးလေးများပါရှိသောအခါ, accumbens DA လျော့ကျနေဆဲ, မြင့်သိပ်သည်းဆလက်မောင်းရွေးချယ်အတားအဆီးကိုတက်သဖြင့်, လုံးလေးများလောင်ဖို့စီမံကြွက်များနှင့်အတူ (ဝမ်းကွဲ et al ။ , 1996) ။ နှစ်ဦးစလုံးလက်မောင်းရာအရပျထဲမှာအတားအဆီးခဲ့သည့်အခါကြွက်နှင့်အတူမကြာသေးမီကသည် T-ဝင်္လေ့လာမှုမှာအတားအဆီးတွေနဲ့လက်ရုံး၏ haloperidol လျှော့ချရွေးချယ်မှုစဉ်, ဒီမူးယစ် (။ Pardo et al ထုတ်ဝေရန် submitted) ရှေးခယျြမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးနိမ်သိပ်သည်းဆကျော်အစားအစာဆုလာဘ်၏မြင့်သိပ်သည်းဆများအတွက် preference ကိုပြောင်းလဲပစ်ပါဘူး, နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု, မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်လက်မောင်း preference ကိုဆက်စပ်သောဆာပသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အတူတူအထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် FR5 / Chow တွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကြွက်များတွင် T-ဝင်္လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို, အနိမ့် DA ရန်၏ဆေးများနှင့် DA လျော့ကျ accumbens တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်မှာအခြေခံသူတို့ရဲ့ဆာပတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေး reallocate မှတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းညွှန်ပြ တာဝန်၏, နှင့် (နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုတွေ့မြင်စစ်ကူရယူဘို့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အခြားနည်းလမ်းကို select Salamone et al ။ , 2003, 2005, 2007; Floresco, စိန့်Önge, et al ။ , 2008).
ကြိုးစားအားထုတ်မှုလျော့စျေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်အသုံးချခဲ့ကြသည်။ Floresco, စီ, et al ။ (2008) အချိန်နှောင့်နှေး၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်လျှင်ပင်ဝအဆိုပါ DA ရန် haloperidol ပြောင်းလဲကြောင်းအားထုတ်မှုသရုပ်ပြ (ကြည့်ရှု Wade, de Wit, & Richards, 2000; နှင့် Koffarnus, Newman က, Grundt, ဆန်, & ဝုဒ်, 2011 DA ရန်နှင့်နှောင့်နှေးလျှော့) ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်စာပေထဲမှာရောထွေးတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဆွေးနွေးမှုသည်။ Bardgett, Depenbrock, Down, Points, & အစိမ်းရောင် (2009) မကြာသေးမီကဝင်္၏မြင့်-သိပ်သည်းဆလက်မောင်းအတွက်အစားအစာ၏ပမာဏကိုကြွက်ကြောင့်လက်မောင်း (ဆိုလိုသည်မှာ၏မူကွဲဝတခု "ကိုချိန်ညှိ-ငွေပမာဏကို" ကိုရှေးခယျြထားတဲ့အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးလျော့ခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦးကို T-ဝင်္အားထုတ်မှု-ဝတာဝန်, တီထွင် တစ်ဦးချင်းစီကြွက်တစ်ခုလျစ်လျူ point ရဲ့ပြဌာန်းခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ T-ဝင်္လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ,) ။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလျော့စျေးကတော့: D အားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်1 မိသားစုရန် SCH23390 နှင့် D ကို2 မိသားစုရန် haloperidol; ဒီဆေးတွေကြွက်ဟာအနိမ့်အားဖြည့် / တန်ဖိုးနည်းလက်မောင်းကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့သူကပိုများပါတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စိတ်ကြွဆေး၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်တိုးပွားလာ DA ဂီယာ DA Transporter knockdown ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးအော်ပရေတာရှေးခယျြမှုလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်သော High-အားဖြည့် / High-ကုန်ကျစရိတ်လက်မောင်း, (ရွေးချယ်ရာတွင်ဆီသို့ဦးတည် SCH23390 နှင့် haloperidol နှင့်လည်းဘက်လိုက်ကြွက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားCagniard, Balsam, Brunner, & Zhuang, 2006) ။ အတူတူနဲ့အခြားရလဒ်များကိုနှင့်တကွ, တွေ့ရှိချက် Bardgett et al အားဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ et al နှင့် Floresco, စီ။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီး, DA ဂီယာအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦး bidirectional သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်, ထိုအကြံပြုချက်ကိုထောကျပံ့။
DA အားထုတ်မှု-RELATED Choice အပြုအမူလွှမ်းမိုးရန်အခြားသတင်းများ transmitter ဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်
အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်, DA ရန်နှင့် accumbens DA လျော့ကျဆာပတုံ့ပြန်မှု output ကို, တုန့်ပြန်ခွဲဝေနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့မရှိတစ်ခုတည်းကဦးနှောက်ဧရိယာသို့မဟုတ် neurotransmitter သည်အခြားအဆောက်အဦများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းမှအထီးကျန်မှုတွေအတွက်အမူအကျင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်; ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကအခြားဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurotransmitters dopaminergic ယန္တရားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတော်ကြာကျော်အများအပြားဓါတ်ခွဲခန်းမျိုးစုံဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ (ဥပမာ amygdala, anterior cingulate cortex, ventral pallidum) နှင့် neurotransmitters သောအခန်းကဏ္ဍတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများစတင်ပါပြီ (Adenosine, ဂါဘမြို့သား) (အားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအတွက်ကစားDenk et al ။ , 2005; Farrar et al ။ , 2008; Floresco & Ghods-Sharifi, 2007; Floresco, စိန့်Önge, et al ။ , 2008; Hauber & Sommer, 2009; Mott et al ။ 2009; Pardo et al စာစောင်များအတွက်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ; Schweimer & Hauber, 2006; ဗန်တွင်း Bos et al ။ 2006; Walton, Bannerman, Alterescu, & Rushworth, 2003; Walton, Bannerman, & Rushworth, 2002).
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလေးပေး DA / adenosine interaction ကပေါ်မှာနေရာချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဖိန်းဓာတ်နှင့် nonselective adenosine ရန်ဖြစ်ကြသည်သောအခြား methylxanthines, အဖြစ်အသေးစားစိတ်ကြွဆေးပြုမူ (Ferré et al ။ , 2008; Randall, Nunez, et al ။ , 2011) ။ အဆိုပါ neostriatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင် DA-ကြွယ်ဝသောဦးနှောက်ဧရိယာများ, adenosine တစ်ဦးကတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားဒီဂရီများ2A အဲဒီ receptor စကားရပ် (DeMet & Chicz-DeMet, 2002; Ferré et al ။ , 2004; Schiffman, Jacobs, & Vanderhaeghen, 1991) ။ DA: D အကြားဆယ်လူလာ interaction က၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်2 နှင့် adenosine တစ်ဦးက2A receptors (Ferré, 1997; က Fink et al ။ , 1992; Fuxe et al ။ , 2003; Hillion et al ။ , 2002) ။ ဒါဟာအပြန်အလှန်မကြာခဏ (Parkinson နှင့်ဆက်စပ်သော neostriatal မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖို့ကိစ်စတှငျလေ့လာခဲ့ထားပြီးကော်ရဲရား et al ။ 2004; Ferrée, Fredholm, Morelli, Popoli, & Fuxe, 1997; Ferré et al ။ , 2001; Hauber & Munkel, 1997; Hauber, Neuscheler, Nagel, & Muller, 2001; Ishiwari et al ။ , 2007; Morelli & Pinna, 2002; Pinna, Wardas, Simola, & Morelli, 2005; Salamone, Betz, et al ။ 2008; Salamone, Ishiwari, et al ။ , 2008; Svenningsson, Le Moine, Fisone, & Fredholm, 1999; Wardas, Konieczny, & Lorenc-Koci, 2001) ။ သို့သော်အများအပြားအစီရင်ခံစာများလည်း adenosine တစ်ဦး၏ရှုထောင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်ဟု2A (သင်ယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအဲဒီ receptor function ကိုTakahashi, Pamplona, ​​& Prediger, 2008), စိုးရိမ်ပူပန် (Correa & Font, 2008), နှင့်တုံ့ပြန်ဆာ (font et al ။ , 2008; Mingote et al ။ , 2008).
adenosine တစ်ဦးအပေါ်သို့ပြုမူကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါး2A receptors အလှနျ (ဆာတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူကိုထိခိုက်Farrar et al ။ , 2007, 2010; font et al ။ , 2008; Mingote et al ။ , 2008; Mott et al ။ , 2009; Pardo et al စာစောင်များအတွက်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ; Worden et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ adenosine တစ်ဦး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ထိုး2A agonist CGS 21680 ပူးတွဲတစ် FR60 လိုအပ်ချက်နဲ့ VI ကို 10-စက္ကအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်လျှော့ချ, ဒါပေမယ့် (ကသမားရိုးကျ VI ကို 60-စက္ကအချိန်ဇယားအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အယှက်မပြုခဲ့Mingote et al ။ , 2008), ကြောင်းဆင်တူတဲ့ပုံစံကိုယခင်က (accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူပြသMingote et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ FR5 / Chow တွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်တုံ့ပြန်ကြွက်များမှာ accumbens သို့ CGS 21680 ၏ထိုး (စာလုံး et al ။ ) ကိုနှိပ်လီဗာလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် Chow စားသုံးမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ accumbens ဖို့ထိန်းချုပ်မှု site ကို dorsal သို့ CGS 21680 ၏ထိုးအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့သောကွောငျ့ဤအဆိုးကျိုးများ (တိကျတဲ့ site ကိုခဲ့ကြသည်Mingote et al ။ , 2008; font et al ။ ) ။
ဒါဟာအစကြောင်း adenosine တစ်ဦးကသရုပ်ပြခဲ့ပြီး2A အဲဒီ receptor ရန်စနစ်တကျအုပ်ချုပ် DA: D များ၏သက်ရောက်မှု reverse နိုင်ပါတယ်2 တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်နို့တိုက်ကျွေးမှုအတွက် FR5 / Chow (အပေါ်စမ်းသပ်ပြီးကြွက်များတွင်ရန်Farrar et al ။ , 2007; Nunes et al ။ , 2010; Salamone et al ။ , 2009; Worden et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ adenosine တစ်ဦး၏ထိုမှတပါး, စနစ်တကျသို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ထိုး2A ရန် MSX-3 သည့် D ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ထိုးများ၏သက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့တယ်2 အဆိုပါ FR5 / Chow တွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်တုံ့ပြန်ကြွက်များတွင်ရန် eticlopride (Farrar et al ။ , 2010) ။ , adenosine တစ်ဦးက T-ဝင်္အတားအဆီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအတွက်2A ရန် DA: D များ၏သက်ရောက်မှု reverse ပြခဲ့ကြ2 ကြွက်များတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (Mott et al ။ , 2009) နှင့်ကြွက် (Pardo et al ။ , ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်း) ။ ထို့အပွငျ adenosine တစ်ဦးက2A အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက် T-ဝင်္၏မြင့်-အားဖြည့် / High-ကုန်ကျစရိတ်လက်မောင်း (Pardo et al ။ ) ၏ရွေးချယ်ရေးအပေါ် haloperidol များ၏သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုတွေတွင်တွေ့မြင်သက်ရောက်မှု၏ပုံစံကိုတိကျတဲ့အဲဒီ receptor Subtype အုပ်ချုပ်ခံနေရသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်အပေါ်သို့ပြုမူလျက်ရှိသည်ထားတဲ့အပျေါ၌မူတည်ပါသည်။ အဆိုပါ adenosine တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း2A အဲဒီ receptor ရန် MSX-3 နှင့် KW 6002 ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်သိသိသာသာ: D များ၏သက်ရောက်မှု attenuate2 ထိုကဲ့သို့သော FR5 / Chow တွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်တုံ့ပြန်ကြွက်များတွင် haloperidol နှင့် eticlopride အဖြစ်ရန် (Farrar et al ။ , 2007; Nunes et al ။ , 2010; Salamone et al ။ , 2009; Worden et al ။ , 2009), သူတို့က D: များ၏ဆိုးကျိုးများသာပျော့မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ထုတ်လုပ်ရန်1 ရန် ecopipam (SCH 39166; Worden et al .; Nunes et al ။ ) ။ ထို့အပြင်အလွန်အမင်းရွေးချယ် adenosine တစ်ဦးက1 အဲဒီ receptor ရန် DA: D များ၏သက်ရောက်မှုများနောက်ပြန်ဆုတ်မှာလုံးဝထိရောက်မှုခဲ့သည်1 သို့မဟုတ်: D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (Salamone et al ။ , 2009; Nunes et al ။ ) ။ အလားတူရလာဒ်များကြွက်များနှင့် T-ဝင်္အတားအဆီးရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်တုံ့ပြန်ကြွက်နှင့်အတူရရှိခဲ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, MSX-3 သည့် D ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု reverse နိုင်ခဲ့သည်စဉ်2 high-အားဖြည့် / High-ကုန်ကျစရိတ်လက်မောင်း, ထိုတစ်ဦး၏ရွေးချယ်ရေးအပေါ်ရန် haloperidol1 DPCPX နှင့် CPT (မရန်Mott et al ။ , 2009; Pardo et al ။ , ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်း) ။ ဤရလဒ်သည် DA D ကိုအပေါ်သို့ပြုမူကြောင်းမူးယစ်ဆေးများအကြားတစ်ဦးအတော်လေးရွေးချယ်အပြန်အလှန်ရှိကွောငျးညွှန်ပြ2 နှင့် adenosine တစ်ဦးက2A အဲဒီ receptor Subtype (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 1) ။ ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများအပျေါမှာအခြေခံပြီးဒီ adenosine တစ်ဦး၏ဆယ်လူလာမူပြောင်းခြင်း၏ပုံစံကြောင့်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်းပေါ်လာသည်1 နှင့် A2A နျူကလီးယပ် accumbens အပါအဝင် striatal ဒေသများရှိ receptors, (Ferré, 1997; က Fink et al ။ , 1992; Fuxe et al ။ , 2003; Hillion et al ။ , 2002; Svenningsson et al ။ , 1999) ။ adenosine တစ်ဦးက2A receptors ပုံမှန်အား striatal အပေါ်ပူးတွဲဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြပြီး DA D နဲ့ enkephalin-အပြုသဘောအလတ်စား spiny အာရုံခံ accumbens2 မိသားစု receptors နှင့်နှစ်ဦးစလုံး receptors အတူတူ intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ဆုံ။ ထို့ကြောင့် adenosine တစ်ဦးက2A အဲဒီ receptor ရန်: D များ၏လုပ်ရပ်များနောက်ပြန်ဆုတ်အတွက်ဒါထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်2 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DA: D အကြားတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ရန်2 နှင့် adenosine တစ်ဦးက2A တူညီသောအာရုံခံ (ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး receptorsFarrar et al ။ , 2010; Salamone et al ။ , 2009, 2010).
Adenosine အဲဒီ receptor ရန်။
SUMMARY နိဂုံး: အပြုအမူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း AND PSYCHOPATHOLOGY FOR ဂယက်ရိုက်
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ယေဘုယျသဘောတူညီချက်ကြောင့်နျူကလိယ DA accumbens နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုနေဆဲသွင်ပြင်လက္ခဏာလျက်ရှိသည်သော်လည်းဆက်စပ်ဦးနှောက်စနစ်များ, ဆာပအပြုအမူများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ လည်းမရှိ ဒီဧရိယာ၌တဦးတည်းအယူအဆရေးရာန့်အသတ်ထိုကဲ့သို့သော "ဆုလာဘ်", "အားဖြည့်", "သင်ယူမှု", "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "မော်တာထိန်းချုပ်မှု" အဖြစ်တစ်ကမ္ဘာလုံး Construction DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ကျ၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်အသုံးဝင်သော descriptor များကိုအစေခံရန်လည်းယေဘုယျဖြစ်ကြောင်း။ ဖြစ်ပါသည် ဤရွေ့ကားဆောက်လုပ်ရေးအမှန်တကယ်ထိုကဲ့သို့သောအခြားအကြီးအကျယ်နဂိုအတိုင်းထွက်ခွာစဉ်ပြင်းထန်စွာတစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုအယှက်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်တွေ့ရှိရပါသည်အဖြစ်ဦးနှောက်ထိန်းသိမ်းရေးနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ dissociated နိုင်ပါတယ်အများအပြားရာအများအပြားကွဲပြားဖြစ်စဉ်များ, (ပါဝင်ပတ်သက်နေBerridge & ရော်ဘင်ဆင်, 2003; Salamone & Correa, 2002; Salamone et al ။ , 2007) ။ အခြေခံအားဖြင့်နဂိုအတိုင်းမူလတန်းအားဖြည့်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှု၏အခြေခံရှုထောင့်မှထွက်ခွာစဉ် DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဆာပအပြုအမူအချို့ကို features တွေချို့ယွင်းနေသောကြောင့်အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အထောက်အထားအပျေါမှာအခြေခံပြီး, DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မဆိုယေဘုယျသဘောဖွငျ့ "ဆုလာဘ်" အယှက်မပေးပါဘူး (ရိုးရှင်းတဲ့၏ဥပမာအားဖြည့် ဆာတုံ့ပြန်မှု၏စစ်ကူများစားသုံးမှု) ။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုကဲ့သို့သော "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "မော်တာ function ကို" အဖြစ်ကအရမ်းကျယ်ပြန့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြားထပ်တူ၏ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းနျူကလိယ၏မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်စိတ်ခွန်အားနိုးကြားတစ်ဦးတင်းကျပ် dichotomy လိုက်နာကြိုးစားနိုင်ပေမယ့် DA accumbens, ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သဘောတရားမလိုအပ်ပါဘူး။ အတန်ငယ်ကွဲပြားသဘောတရား, (ပါဝင်ဖော်ပြထားခံရအပြုအမူများ၏တိကျသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဦးနှောက်ဆားကစ်တချို့၏စည်းကမ်းချက်များ၌သိသိသာသာထပ်သော်လည်း၎င်းသည်ထို "မော်တာထိန်းချုပ်မှု" နှင့် "လှုံ့ဆျောမှု" စောဒကတက်ထားသည်Salamone, 1987, 1992, 2010b; Salamone & Correa 2002; Salamone et al ။ , 2003, 2005, 2007) ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဤလိုင်းနှင့်ကိုက်ညီပါကကြောင်း DA (မော်တာနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအကြားထပ်တူဒေသများတွင်ကိုယ်စားပြုကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင် accumbens အကြံပြုဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည်Salamone, 1987, 2010b; Salamone et al ။ , 2007) ။ ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြအမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ဖြစ်စဉ်များအမျိုးအစားများပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ နျူကလိယ (DA အချိန်ဇယား-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိရိစ္ဆာန်များအားဖွင့်အဘို့အရေးကြီးပါတယ် accumbensMcCullough & Salamone, 1992; Robbins & Everitt, 2007; Robbins & Koob, 1980; Robbins et al ။ , 1983; Salamone 1988; Wallace et al ။ , 1983), နှင့်အချိုးအချိန်ဇယားအားဖြင့်ချမှတ်ထားအလုပ်-related စိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန် (Aberman & Salamone, 1999; ကော်ရဲရား et al ။ 2002; Mingote et al ။ , 2005; Salamone et al ။ , 2002, 2003, 2005; Salamone, Correa, Mingote, Weber, & Farrar, 2006) နှင့်ဝင်္အတွက်အတားအဆီး (ဝမ်းကွဲ et al ။ , 1996; Salamone et al ။ , 1994) ။ ထိုမှတပါး, အမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် accumbens DA ၏အကြံပြုပါဝင်ပတ်သက်မှု accumbens nucleus သောအယူအဆနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် (Pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများမှတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးတယ်Day, ဝီ, Roitman, & Carelli, 2006; di Ciano, Cardinal, Cowell, Little, & Everitt, 2001; Everitt et al ။ , 1999; Everitt & Robbins, 2005; ပါကင် et al ။ , 2002; Robbins & Everitt, 2007; Salamone et al ။ , 2007).
ထို့ကြောင့် accumbens DA ၏ချို့ယွင်းဂီယာနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များ, မူလတန်းစစ်ကူများဝယ်ယူခြင်းနှင့်စားသုံးမှုဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း DA မြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူဆာပအပြုအမူတွေအားဖြင့်တင်ပြအလုပ်-related စိန်ခေါ်မှုများကျော်လွှားဘို့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး accumbens ။ ဒါဟာတစ်ဦးတည်းသာ accumbens DA များထဲမှ function ကိုကိုယ်စားပြုသည်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်စာတမ်းများ (ဥပမာအတွက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်အဖြစ် Salamone et al ။ , 2007), က DA တစ်ဦးတည်းသာ function ကိုဆောင်ရွက် accumbens ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း, DA အားထုတ်မှုများ၏ခေတ္တခဏတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်သို့မဟုတ်အားထုတ်မှု-ဆက်စပ်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူဆာပသင်ယူမှု (၌ဤစနစ်၏တွေးဆပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့သဟဇာတမဖြစ်သောအယူအဆ၏မျက်နှာသာအတွက်သက်သေအထောက်အထားBaldo & ကယ်လီ, 2007; Beninger & Gerdjikov, 2004; ကယ်လီ et al ။ , 2005; စီဂိုဗီယာ et al ။ , 2011; ပညာရှိ 2004"လို"), မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏ရှုထောင့် (ဥပမာစစ်ကူ; Berridge 2007; Berridge & ရော်ဘင်ဆင်, 2003; Wyvell & Berridge, 2001) သို့မဟုတ် Pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်း (Everitt & Robbins, 2005).
မူးယစ်ဆေးဝါးပြင်းပြင်းထန်ထန်တဦးတည်းကိုထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်အပြုအမူများ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသို့မဟုတ်ကွေး-သငျ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သော parameter သည်, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူနှင့်အများအပြားအချက်များရှိနိုင်ပါသည်, pharmacological သုတေသနကနေဆင်းသက်လာတစ်ဦးကတိုင်းတာမကြာခဏဤအချက်များအကြား dissociate နိုင်ပါတယ် အခြားအခြေခံအားဖြင့်နဂိုအတိုင်းထွက်ခွာနေစဉ်။ ဒီနိယာမတစ်ခုအသုံးဝင်သောဥပမာအထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းအရာ, ထိုတိုးတက်သောအချိုးချိုးအချက်ဖြစ်ပါသည် (တော်တော်များများအချက်များကလွှမ်းမိုးနေသည်Pardo et al ။ , 2011; Randall, Pardo, et al ။ , 2011b) ။ ဒီပွိုင့်မြင့်မားသက်ဆိုင်ရာဖြစ်သည့်အတွက်နောက်ထပ်အမှု intracranial Self-stimulation တံခါး၏တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအမံမကြာခဏ "ဆုလာဘ်" ၏ "မှုနှုန်း-အခမဲ့" ညွှန်းကိန်းပေး, ဒါမှမဟုတ်ပင် "hedonia" အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်, သို့ရာတွင်သူတို့လီဗာကိုနှိပ်အချိုးလိုအပ်ချက်အဖြစ်လျှပ်စစ်လက်ရှိအဆင့် (ကလွှမ်းမိုးထားပါသည်Fouriezos, Bielajew, & Pagotto, 1990) ။ intracranial Self-stimulation တံခါးနဲ့အတူမကြာမီကလေ့လာမှုများ (Self-stimulation တံခါး၏ dopaminergic မော်ဂျူနှုန်း se ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုမထိခိုက်မညွှန်ပြပေမယ့်အစားတုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ဖို့စိတ်သဘောထားပွောငျးလဲဟာနန်ဒက်ဇ်, ဘရီတွန်, Conover, & Shizgal, 2010) ။ တုန့်ပြန်-အားဖြည့်ကိုက်ညီခြင်းကိုလည်းအမူအကျင့်ဘောဂဗေဒ, စစ်ကူတန်ဖိုးနှင့် DA စနစ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ဆက်စပ်သောအချို့သောသုတေသန (ဥပမာများတွင်အသုံးပြုထားသည် Aparicio, 2007; Heyman, Monaghan, & Clody, 1987) ။ ကိုက်ညီညီမျှခြင်းဥပမာ R ကို (VI ကိုအချိန်ဇယားနှင့်အတူလေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသောညီမျှခြင်းကနေ parameters တွေကို၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်အလုပ်ပြီo) ဥပမာ (အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုရန်အသုံးပြုခဲ့ကြ, Herrnstein 1974; R ကိုo ) အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှအားဖြည့်နှုန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းထားသည်နှင့်ပြောင်းပြန်အဆိုပါစီစဉ်ထားပေါ်ဖြစ်ပေါ်၏တန်ဖိုးကို reinforcement နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ တို့ကမှတ်ချက်ပြုထားသကဲ့သို့ Killeen (1995), မျက်မြင်လက်တွေ့, R ကိုo အဆိုပါကွေးလျောက်ပတ်ဖော်မြူလာများအတွက် "ဝက်ဘဝစဉ်ဆက်မပြတ်" ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သို့သော် R ကို, ဒီလမ်းအတွက်အသုံးပြုo ရွေးချယ်အစားအစာနှုန်း se ၏အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုမထားဘူး။ အကောင်းဆုံးမှာ, ဒီအတိုင်းအတာ (ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိသမျှသည်အခြားသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများအားဖြည့်တန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်လီဗာအဘို့အနှိပ်များနှင့်စားနပ်ရိက္ခာစစ်ကူစားသုံး၏တစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ရှားမှုများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်Salamone et al ။ , 1997, 2009; ဝီလျံ, 1988) ။ (အများအပြားအချက်များကဤပေါင်းစပ်အတိုင်းအတာအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး, မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်တွေ့ရှိရပါသည်ကိုင်တွယ်အမှန်တကယ်တုံ့ပြန်မှု-related အချက်များပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း "အားဖြည့်တန်ဖိုးကို on" သိသာသက်ရောက်မှုလိုက်လျောနိုင်Salamone, 1987; Salamone et al ။ , 1997, 2009) ။ ထို့အပွငျကိုက်ညီညီမျှခြင်း (တုံ့ပြန်မှု preference ကိုသို့မဟုတ်ဘက်လိုက်မှု၏ခန့်မှန်းချက်အဘို့အခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ကိုက်ညီခြင်းမှသွေဖီဘို့အကောင့်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြAparicio, 2001; Baum, 1974; ဝီလျံ, 1988), အရာကိုလည်းမူးယစ်ဆေးကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဤအချက်များ၏အမြင်တွင်ထိုသို့သော "တန်ဖိုးကို" အဖြစ်အသုံးအနှုန်းများအပြုအမူဘောဂဗေဒနှင့် neuroeconomics သုတေသနအတွက်အသုံးပြုကြသည်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရန်အသုံးဝင်သည်။ တစ်ဦးဆာပလှုပ်ရှားမှုများ၏စုစုပေါင်းအားဖြည့်တန်ဖိုးကို (ဥပမာအဘို့အနှိပ်နှင့်အစားအစာစားသုံးလီဗာ) ဖြစ်နိုင်စစ်ကူသူ့ဟာသူ၏အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုနှစ်ဦးစလုံးပါဝငျသောပေါင်းစပ်အတိုင်းအတာအဖြစ်ရှုမြင်နှင့်လည်းမည်သည့်အသားတင်တန်ဖိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်သောဆာပတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်ရပါမည် ယင်းစစ်ကူရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီထုံးစံ၌ Viewed, အားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအပေါ် DA ရန်သို့မဟုတ်လျော့ကျများ၏သက်ရောက်မှုများအထူးသဖြင့်ဆာပတုံ့ပြန်မှုထက်အားဖြည့်နှိုးဆွသူ့ဟာသူ၏အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုနှင့်ဆက်စပ်တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်အပေါ်သို့လုပ်ရပ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြထားနိုငျသညျ။ ပေမယ့်အတော်လေးဆင်တူနှစ်ခုခရိုနီအသုံးပြုသောအခါဘက်လိုက်မှုအပေါ် haloperidol ၏သက်ရောက်မှုဥပမာ (အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်စေခြင်းငှါ, Aparicio, 2007အစားအစာမှ vs. တားမြစ်ခြင်းမရှိသော access ကိုနှိပ်လီဗာ;; အတားအဆီးအစားအသောက်င်တစ်ဦး၏တည်နေရာမှရွေ့လျား vs. တက်ပြီး)), သူတို့ကသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုများ (ဥပမာ, လီဗာနှာခေါင်း Poke vs. နှိပ်သို့မဟုတ် sniffing နှိုင်းယှဉ်ကြသောအခါအများကြီးပိုကြီးတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်တွေ့မြင်ဆာပအပြုအမူ၏ရှုထောင့်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးအပြင်, ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအပေါ်သုတေသနပြုလည်းလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ စွဲလူတစ်ဦး၏ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းမှု, အစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာဆီသို့ဦးတည်အပြုအမူအရင်းအမြစ်များခွဲဝေချထားအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကို (တစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Heyman, 2009; Vezina et al ။ , 2002), နှင့်ဝယ်လိုအား၏ inelasticity (Heyman, 2000) ။ ပုံမှန်အားဖြင့်မကြာခဏအခြားအမူအကျင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမူးယစ်ဆေး-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဟာကြီးထွားသဘောထားကိုရှိသေး၏။ စွဲမြောက်မြားစွာအတားအဆီးနှင့်အသတ်များကျော်လွှား, သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးမူးယစ်ဆေးရရှိရန်အကြီးအတိုအရှည်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်လူသားများအတွက်မူးယစ်ဆေး-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူအားထုတ်မှု၏ခေတ္တခဏအပါအဝင်များစွာသောဖြစ်စဉ်များ, ပါဝငျသညျ။ မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထား (ရှေ့ပြေးကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် DA ပေါင်းစပ်တားစီးဒီကိုင်တွယ် Self-ဖော်ပြခဲ့သည် "Euphoria ပီတိ" သို့မဟုတ် "တဏှာ" ကိုအကျိုးသက်ရောက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းနီကိုတင်းပါဝင်သောစီးကရက်အားဖြင့်အားဖြည့်တိုးတက်သောအချိုး breakpoints အားတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအတွက်ရလဒ်ကွောငျးဖျောပွသVenugopalan et al ။ , 2011).
အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်စွဲလမ်း၏ရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရ, အားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအပေါ်သုတေသနပြုစိတ်ကျရောဂါထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်ထားတဲ့ထိုကဲ့သို့သော psychomotor နှေးကွေး anergia, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စျြလြူရှုမှုအဖြစ် psychopathological လက္ခဏာတွေများ၏အာရုံကြောအခြေခံကိုနားလည်ဘို့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် သည်အခြားစိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်အာရုံကြောအခြေအနေများ (Salamone et al ။ , 2006, 2007, 2010) ။ အမူအကျင့်သရုပ်ဖျက်ဆီးအားကြီးမားလှပါပြီနိုငျသောဤအလက္ခဏာတွေ, (Demyttenaere, De Fruyt, & Stahl, 2005; Stahl, 2002), မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆာပသောအပြုအမူ၏ရှုထောင့်, အားထုတ်မှု၏အားထုတ်မှုနှင့်အလုပ်ခွင်၌အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောအားထုတ်မှု -related ရွေးချယ်မှု၏ရှုထောင့်အတွက်ချို့ယွင်းအဖြစ်ဘဝ function ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကန့်သတ်, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ကုသမှုမှတုန့်ပြန်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းစိတ်ကျရောဂါကုသမှုအတွက်အပြုအမူဆိုင်ရာကုသမှုကုထုံးကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားလာခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်လူနာအားအားဖြည့်ရန်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုတားဆီးသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်အဆင့်အလိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စနစ်တကျတက်ကြွစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။Jacobson, Martell, & Dimidjian, 2001; Weinstock, Munroe, & Miller က, 2011) ။ ထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် psychomotor နှေးကွေး anergia ်ပတ်သက်နေခဲ့ကြသောဦးနှောက်စနစ်များ (အတွင်းကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံကြော circuitry အကြားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာထပ်နေသည်ကိုလည်းမရှိSalamone et al ။ 2006, 2007, 2009, 2010; Treadway & Zald, 2011) ။ ထို့ကြောင့်အခြေခံနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related အပြုအမူဖြစ်စဉ်များ, သူတို့၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းအပေါ်လက်တွေ့သုတေသန, စွဲလမ်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အခြားရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောလက်တွေ့သုတေသနအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်လွှာ: အလုပ်၏အများစုမှာဤသုံးသပ်ချက်ကိုကိုးကားFundació UJI / Bancaixa (P078023B1.1-2010) မှအမေရိကန် NIH / NIMH (MH43) မှ၎င်း, MC မှ JDS ဖို့ထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်။
Merced ကော်ရဲရားနှင့် Marta Pardo ဧရိယာက de Psicobiol မှာယခုဖြစ်ကြသည်။ , Dept. Psic ။ , Universitätက de Jaume ငါ Castello, 12071, စပိန်။
Aberman je, Salamone JD နျူကလိယ dopamine တွေပျက်စီးမှုမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားလိုအပ်ချက်များကြွက်များထက်ပိုအထိခိုက်မခံစေပေမယ့်မူလတန်းအစားအစာအားဖြည့်အယှက်မပေးပါဘူး accumbens ။ neuroscience ။ 1999; 92: 545-552 ။ [PubMed]
Allison ဂျေစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့်အော်ပရေတာအေးစက်။ ခုနှစ်တွင်: Harzem P ကို, Zeiler MD, အယ်ဒီတာများ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်း, ဆက်စပ်မှုများနှင့်တဆက်တည်း။ နယူးယောက်: ယော Wiley နှင့်သား, 1981 ။ စစ။ 321-353 ။ (Eds ။ )
Allison ဂျေတုံ့ပြန်မှုဟာဆင်းရဲချို့တဲ့, အားဖြည့်ခြင်း, ဘောဂဗေဒ။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1993; 60: 129-140 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Amtage J ကို, Schmidt က WJ context-မှီခို catalepsy ပြင်းထန်မှုဂန္ထဝင်အေးစက်အရေးကြီးတဲ့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 2003; 14: 563-567 ။ [PubMed]
Anstrom KK, Woodward DJ သမားတွေဆက်ရှိနေနိုးကြွက်များတွင်ပစ်ခတ် dopaminergic ပေါကျကှဲတိုးပွားစေပါသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1832-1840 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင် Overmatching Aparicio CF: အအတားအဆီးရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်း။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 2001; 75: 93-106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Aparicio CF Haloperidol, ရွေးချယ်မှုဒိုင်းနမစ်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပညတ်တရား၏ parameters တွေကို။ အမူအကျင့်လုပ်ငန်းစဉ်။ 2007; 75: 206-212 ။ [PubMed]
အာနိုး JM, ရောဘတ် DC ကမူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြည့်များ၏အာရုံကြောအလွှာဟာဆနျးစစျဖို့အသုံးပြုသတ်မှတ်ထားတဲ့နှင့်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယား၏ဝေဖန်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1997; 57: 441-447 ။ [PubMed]
asin Ke, လီဗာ-နှိပ်ခြင်းနှင့် haloperidol ပြီးနောက်တုံ့ပြန်အတွက် Fibiger HC အင်အားစုလိုအပ်ချက်များကို။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1984; 20 (3): 323-326 ။ [PubMed]
Bakshi VP, နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူ၏ကယ်လီ AE Dopaminergic စည်းမျဉ်း: သုံး striatal ငျဒသေအတွက် haloperidol microinjection ၏ဗြဲ Differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychobiology ။ 1991; 19: 223-232 ။
Baldo BA, သိသာစွာကွဲပြားစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ၏ကယ်လီ AE ပြတ် neurochemical ကုဒ်: နို့တိုက်ကျွေးရေး၏နျူကလိယ accumbens ထိန်းချုပ်မှုကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 439-459 ။ [PubMed]
Baldo BA, Sadeghian K ကို Basso လေး, ရွေးချယ် dopamine D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ကယ်လီ AE အကျိုးသက်ရောက်မှုနျူကလိယအတွင်းစားသုံးမိအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ငျဒသေ accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137: 165-177 ။ [PubMed]
Barbano MF, hedonic အတွေ့အကြုံနှင့် dopamine များအတွက် Cador အမ် Opioids ကအဆင်သင့်ရဖို့။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 497-506 ။ [PubMed]
Bardgett ME, Depenbrock M က, Down N က, M ကထား, အစိမ်းရောင်အယ်လ် Dopamine ကြွက်များတွင်အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ modulates ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2009; 123: 242-251 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barrett je, Bergman ဂျေပတေရုသခ Dews နှင့်အပြုအမူအပေါ် pharmacological လေ့လာမှုများ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 2008; 326: 683-690 ။ [PubMed]
Baum WM ဟာတိုက်ဆိုင်သည့်ပညတ်တရား၏လက်မှသှဖေနှစ်မျိုးတွင်: ဘက်လိုက်မှုနှင့် undermatching ။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1974; 22: 231-242 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Beninger RJ, Cheng က M, Hahn BL, ဟော့ဖ်မန်း, DC, Mazurski EJ, Morency MA, Ramm P ကို, မျိုးသုဉ်း, pimozide, SCH 23390 နှင့်ကြွက်များ၏တုံ့ပြန်အစားအစာ-ဆုခခြံအော်ပရေတာပေါ် metoclopramide ၏ Stewart က RJ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1987; 92: 343-349 ။ [PubMed]
Beninger RJ, Gerdjikov တီဆုလာဘ်-related မက်လုံးပေးသင်ယူမှုအတွက်မော်လီကျူးများပြ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neurotoxicology သုတေသန။ 2004; 6: 91-104 ။ [PubMed]
Berridge KC ဆုချခြင်းအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ over နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု - မက်လုံးများလွန်းခြင်း။ စိတ်ပညာ။ 2007; 191: 391-431 ။ [PubMed]
Berridge KC, အပျြောအပါး၏ Kringlebach ML ကိုထိခိုက် neuroscience: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ်။ Psychopharmacology ။ 2008; 199: 457-480 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ဆန်းစစ်မှုဆုလာဘ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2003; 26: 507-513 ။ [PubMed]
Bickel wk, Marsch LA က, ကာရိုး ME ဆွေမျိုးအားဖြည့်ထိရောက်မှု Deconstructing နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဘောဂဗေဒနှင့်အတူ pharmacological အားဖြည့်များ၏အစီအမံ situating: တစ်သီအိုရီအဆိုပြုချက်ကို။ Psychopharmacology ။ 2000; 153: 44-56 ။ [PubMed]
Blazquez pm တွင်, Fujii N ကို, Kojima J ကို, Graybiel လေးဟာ striatum အတွက်တုန့်ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏တစ်ဦးကကွန်ယက်ကိုကိုယ်စားပြုမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 33: 973-982 ။ [PubMed]
Brauer LH, De ကျေးအိပ်ချ်မြင့်မားထိုး pimozide ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် Euphoria ပီတိပိတ်ဆို့မထားဘူး။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1997; 56: 265-272 ။ [PubMed]
Brischoux က F, Chakraboty, S, Brierley ပစ, noxious လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏ Ungless MA Phasic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2009; 106: 4894-4899 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နျူကလီးယပ်အတွက် Basal dopamine နဲ့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် subchronic စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှု၏တံမြက်စည်း SL, Yamamoto ကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်များ၏အခွံ accumbens ။ Psychopharmacology ။ 2005; 181: 467-476 ။ [PubMed]
Cagniard B က, ဗာလစံ PD, Brunner: D, လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်နာတာရှည်မွငျ့မား dopamine ပြပွဲနှင့်အတူ Zhuang X တို့မှာကြွက်တွေကကားအစားအစာဆုလာဘ်အဘို့, သင်ယူခြင်းမဟုတ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 1362-1370 ။ [PubMed]
Cannon CM, Bseikri MR သဘာဝအလျောက်အကျိုးသည်လိုအပ်သော dopamine ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 81: 741-748 ။ [PubMed]
ဖုံးသောအမြှေး WF, haloperidol နှင့်စိတ်ကြွဆေးများ Brindle NA ဇယား-မှီခိုသက်ရောက်မှု: အတွင်း-ဘာသာရပ်သက်ရောက်မှုမျိုးစုံကို-အချိန်ဇယားကိုတာဝန်ပြပွဲ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 68: 53-63 ။ [PubMed]
Collier GH, ဆာပစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုပစ်မှတ်အဖြစ် Jennings ဒဗလျူသူ Work ။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝစိတ်ပညာ၏ Jounral ။ 1969; 68: 659-662 ။
ကော်ရဲရားက M, Carlson BB, Wisniecki တစ်ဦးက, Salamone JD နျူကလိယကြားကာလအချိန်ဇယားအပေါ် dopamine နှင့်အလုပ်လိုအပ်ချက်များကို accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137: 179-187 ။ [PubMed]
ကော်ရဲရားက M, စာလုံးအယ်လ်စိုးရိမ်စိတ်အတွက် adenosine A2A receptors များအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိပါသလား။ Bioscience အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2008; 13: 4058-4070 ။ [PubMed]
Correa M, Wisniecki A, Betz A, Dobson DR, O'Neill MF, O'Neill MJ, Salamone JD အဆိုပါ adenosine A2A ရန်သူ KF17837 သည်ကြွက်များတွင် haloperidol ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစက်ခေါင်းဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောမေးရိုးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သည်။ အမူအကျင့် ဦး နှောက်သုတေသန။ 2004; 148: 47-54 ။ [PubMed]
ဝမ်းကွဲက MS, Atherton တစ်ဦးက, Turner L ကို, Salamone JD နျူကလိယ dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေမယ့် T-ဝင်္ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ဆွေမျိုးတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေပြောင်းလဲ accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1996; 74: 189-197 ။ [PubMed]
ဝမ်းကွဲက MS, Salamone JD နျူကလိယကြွက်များတွင် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေမယ့်ဝတ္ထုကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ဆွေမျိုးတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေထိခိုက်စေ accumbens ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1994; 49: 85-91 ။ [PubMed]
ဝမ်းကွဲကြွက်များတွင်ဆာပတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေးအပေါ်နျူကလိယ accumbens နှင့် ventrolateral striatal dopamine တွေပျက်စီးမှု၏က MS, Sokolowski JD, Salamone JD အမျိုးမျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1993; 46: 943-951 ။ [PubMed]
ဝမ်းကွဲက MS, ဝေ W / နို့တိုက်ကျွေးရေးရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုနှိပ်တစ်ဦးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းလီဗာပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို၏ Salamone JD Pharmacological စရိုက်လက္ခဏာတွေ: dopamine ရန်၏ဆိုးကျိုးများ, cholinomimetic, သက်သာစေသောဆေးနှင့်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ Psychopharmacology ။ 1994; 116: 529-537 ။ [PubMed]
Das S, Fowler SC Fowler နှင့် Das တို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများ - haloperidol- သွေးဆောင်မှုအတွင်းကြွက်များ၏ခုန်ပေါက်စေသောအပြုအမူများအတွင်း Antolinolinergic ပြောင်းပြန်ပြောင်းခြင်း။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1996; 53: 853-855 ။ [PubMed]
တစ်ဦး autoshaping ပါရာဒိုင်းကနေသက်သေအထောက်အထား: နေ့ JJ, ဝီ RA, Roitman MF, Carelli RM နျူကလိယတွင် neuron Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေဝှက် accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2006; 23: 1341-1351 ။ [PubMed]
Delgado MR, Jou RL, မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းစစ်ကူနှင့်အတူလူသားတွေအတွက်ဆန္ဒရှိအေးစက်အခြေခံ Phelps EA ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2011; 5: 71 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Delgado MR, Li က J ကို, ခီလာ: D, Phelps ကို EA ဆန္ဒရှိသင်ယူမှုနှင့်ဆန္ဒရှိခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများအတွက် striatum ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်။ 2008; 363: 3787-3800 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
DeMet EM, Chicz-DeMet အေ [2H] ZM-3 နှင့်အတူကြွက် ဦး နှောက်ရှိ adenosine A241385A-receptors ကိုနေရာချထားခြင်း။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ Naunyn-Schmiedeberg ၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2002; 366: 478-481 ။ [PubMed]
Demyttenaere K ကို De Fruyt J ကို, Stahl သည် SM အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏များစွာကိုမျက်နှာများ။ Neuropsychopharmacology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2005; 8: 93-105 ။ [PubMed]
Denk က F, ဝေါ်လ်တန် ME, Jennings Ka, Sharp က T က, Rushworth MF, နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်အားထုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် serotonin နဲ့ dopamine စနစ်များ Bannerman DM Differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychopharmacology ။ 2005; 179: 587-596 ။ [PubMed]
မူးယစ်ဆေးဝါးအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏ Dews PB ဆက်သွယ်မှုသည်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1976; 281: 50-63 ။ [PubMed]
di Ciano P ကို, Cardinal RN, Cowell RA, Little က SJ သည်နျူကလိယအတွက် NMDA ၏ Everitt BJ Differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု, AMPA / kainate နှင့် dopamine receptors Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အဓိက accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21: 9471-9477 ။ [PubMed]
Dickinson တစ်ဦးက, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက် Balleine ခလှုံ့ဆျောမှုထိန်းချုပ်ရေး။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူနှင့်အပြုအမူ။ 1994; 22: 1-18 ။
Dunnett SB, အ neostriatum ၏ရွေးချယ် 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ Iversen SD ကစည်းမျဉ်းချို့ယွင်း။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1982; 4: 195-202 ။ [PubMed]
Ettenberg တစ်ဦးက, Koob gf, neuroleptic-သွေးဆောင် anhedonia ၏တိုင်းတာခြင်းအတွက် Bloom FE တုံ့ပြန်မှုရှေးဟောင်းပစ္စည်း။ သိပ္ပံ။ 1981; 213: 357-359 ။ [PubMed]
Evenden JL သည်ကြွက်များတွင်အားဖြည့်များ၏ရွေးချယ်မှုနှင့်နှုန်းကိုတိုင်းတာမှုများအပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး, chlordiazepoxide နှင့် alpha-flupenthixol ၏ Robbins TW Dissociable ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 1983; 79: 180-86 ။ [PubMed]
Everitt BJ, ပါကင်ဂျာ Olmstead MC, အာရိုယိုက M, Robledo P ကို, Robbins TW Associative စွဲနှင့်ဆုလာဘ်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များ။ amygdala-ventral striatal subsystem ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1999; 877: 412-438 ။ [PubMed]
Everitt BJ, မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏ Robbins TW ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များ: compulsion မှအလေ့အထများမှလုပ်ရပ်များမှသည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ [PubMed]
Farrar လေး, စာလုံး L ကို, Pereira M က, Mingote သည် SM, Bunce JG, Chrobak JJ, အားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက် Salamone JD Forebrain circuitry: အဂါဘမြို့သားများထိုးA ventral pallidum သို့ agonist muscimol အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်တုန့်ပြန်ခွဲဝေပွောငျးလဲ။ neuroscience ။ 2008; 152: 321-330 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
psychomotor လျှော့ချ၏လေ့လာမှုများအဘို့အဂယက်: Farrar လေး, Pereira M က, Velasco က F, Hockemeyer J ကို, Muller အီး, Salamone JD Adenosine တစ်ဦးက (2A) အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်ဆာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-ဆက်စပ်ရွေးချယ်မှုအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏သက်ရောက်မှုနောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 579-586 ။ [PubMed]
Farrar လေး, စီဂိုဗီယာ KN, Randall PA ဆိုပြီး, Nunes EJ, Collins LE, အဆို့ CM, ဆိပ်ကမ်း RG, Hockemeyer J ကို, Muller အီးကော်ရဲရားက M, Salamone JD နျူကလိယ accumbens နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို: adenosine A2A အကြားအပြန်အလှန်၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောအမှတ်အသားများ နှင့် dopamine D2 receptors ။ neuroscience ။ 2010; 166: 1056-1067 ။ [PubMed]
Faure တစ်ဦးက, Reynolds က SM, ရစ်ချတ် JM, အလိုဆန္ဒအတွက် Berridge KC Mesolimbic dopamine နဲ့ကြောက်: နျူကလိယ accumbens အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောအချိုမှုပြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးခံရဖို့အားဖွင့်လှုံ့ဆျောမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28: 7184-7192 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Faustman wo, nonreward ထံမှ haloperidol ၏သက်ရောက်မှုခွဲခြားရန်အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုကြာချိန်၏မုဆိုး SC အသုံးပြုခြင်း။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1981; 15 (2): 327-329 ။ [PubMed]
မုဆိုး SC, wo Faustman အဆိုပါ anhedonia ပါရာဒိုင်းအတွက်အတိုင်းအတာများပွုပွငျပွောငျးလဲ, clozapine နှင့် fluphenazine ၏စာမေးပွဲ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1982; 17 (5): 987-993 ။ [PubMed]
Feldon J ကို, အ multitrial တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဆီးမခံရဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှု (PREE) ရက်နေ့တွင် haloperidol ၏ Weiner ဗြဲအကျိုးသက်ရောက်မှု: nonreinforcement အပေါ်သော်လည်းမအားဖြည့်အပေါ် neuroleptic မူးယစ်ဆေးအရေးယူဘို့သက်သေသာဓက။ Psychopharmacology ။ 1991; 105: 407-414 ။ [PubMed]
အဆိုပါ ventral striatum အတွက်Ferréအက်စ် Adenosine-dopamine interaction က။ schizophrenia များ၏ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology ။ 1997; 133: 107-120 ။ [PubMed]
Ferré S က, Ciruela က F, Borycz J ကို, Solinas M က, Quarta: D, Antony K ကို Quiroz ကို C, Justinova Z ကို, Lluis ကို C, Franco R ကို, Goldberg က SR Adenosine A1-A2A အဲဒီ receptor heteromers: ဦးနှောက်ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်အသစ်ပစ်မှတ်။ Bioscience အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2008; 13: 2391-2399 ။ [PubMed]
Ferré S က, Ciruela က F, တူးမြောင်း M က, Marcellino: D, Burgueno J ကို, Casado V ကို, Hillion J ကို, Torvinen M က, Fanelli က F, Benedetti PP, Goldberg က SR, Bouvier M က, Fuxe K ကို Agnati LF, Lluis ကို C, Franco R ကို, ဝုဒ်တစ်ဦးက ။ Adenosine A2A-dopamine D2 အဲဒီ receptor-receptor heteromers ။ neuro-စိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက်ပစ်မှတ်။ ပါကင်နှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများ။ 2004; 10: 265-271 ။ [PubMed]
Ferré S က, Fredholm BB, Morelli M က, Popoli P ကို, အ Basal ganglia အတွက် Integrated ယန္တရားအဖြစ် Fuxe K. Adenosine-dopamine အဲဒီ receptor-receptor interaction က။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1997; 20: 482-487 ။ [PubMed]
Feroli S, Popoli P, Giménez-Llort L, Rimondini R, Müller CE, Strömberg I, Ögren SO, Fuxe K. Adenosine / dopamine အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုအတွက်သက်ရောက်မှု။ ပါကင်ဆန်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ။ 2001; 7: 235-241 ။ [PubMed]
Fibiger HC, Carter က DA, Phillips က AG က neuroleptics သို့မဟုတ် 6-hydroxydopamine ပြီးနောက် intracranial Self-stimulation လျော့နည်းသွား: ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုအားဖြင့်ထက်လျှော့ချဆုလာဘ်တို့ကကြားဝင်ဖြန်ဖြေဘို့အထောကျအထား။ Psychopharmacology ။ 1976; 47: 21-27 ။ [PubMed]
က Fink JS, Weaver DR, Rivkees လုပ် SA, Peterfreund RA, Pollack AE, Adler EM, ကြွက်တစ်ဦး၏ Reppert သည် SM Molecular ကိုယ်ပွား2A adenosine receptor: D နဲ့ရွေးချယ် Co-စကားရပ်2 ကြွက် striatum အတွက် dopamine receptors ။ မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန။ 1992; 14: 186-195 ။ [PubMed]
Floresco SB, Ghods-Sharifi အက်စ် Amygdala-prefrontal cortical circuitry အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချထိန်းညှိ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2007; 17: 251-260 ။ [PubMed]
Floresco SB, စိန့်Önge JR, Ghods-Sharifi S က, ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ subserving Winstanley, CA Cortico-limbic-striatal ဆားကစ်။ သိမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008; 8: 375-389 ။ [PubMed]
Floresco SB, စီ MT, Ghods-Sharifi အက်စ် Dopaminergic နှင့် effort- နှင့်နှောင့်နှေး-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ glutamatergic စည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 1966-1979 ။ [PubMed]
မြောကျမောငျးမမြိုးအတွက်အစားအသောက်အတွက် "ဝယ်လိုအား" ၏ Foltin RW တစ်ခုကစီးပွားရေးဆန်းစစ်။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1991; 56: 445-454 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အဆိုပါ adenosine တစ်ဦးက (2A) agonist CGS 21680 ၏ font L ကို, Mingote S က, Farrar လေး, Pereira M က, Worden L ကို, အဆို့ကို C, ဆိပ်ကမ်း RG, Salamone JD အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ထိုးကြွက်များတွင်အားထုတ်မှု-ဆက်စပ်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Psychopharmacology ။ 2008; 199: 515-526 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fouriezos, G, Bielajew ကို C, Pagotto ဒဗလျူ Task ကိုအခက်အခဲအကြိုးဦးနှောက်ဆွ၏တံခါးတိုးပွားစေပါသည်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1990; 37: 1-7 ။ [PubMed]
Fuxe K၊ Agnati LF၊ Jacobsen K၊ Hillion J, Canals M, Torvinen M, Tinner-Staines B, Staines W, Rosin D, Terasmaa A, Popoli P, Leo G, Vergoni V, Lluis C, Ciruela F, Franco R, adenosine A2A receptor အချက်ပြမှုတွင်Ferréအက်စ် Receptor heteromerization: striatal function ကိုနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ဆက်စပ်မှု။ အာရုံကြော။ 2003; 61: S19-23 ။ [PubMed]
Gawin FH Neuroleptic ကင်း-သွေးဆောင်လီယံ၏လျှော့ချရေးသော်လည်းမ Euphoria ပီတိ။ Psychopharmacology ။ 1986; 90: 142-143 ။ [PubMed]
Gramling SE, မုဆိုး SC, Collins က KR တစ်ဦး anhedonia ပါရာဒိုင်းအတွက် sucrose ဖြေရှင်းချက်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ nondeprived ကြွက်အပေါ် pimozide အချို့သည်ဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1984; 21: 617-624 ။ [PubMed]
Gramling SE, Fowler SC, Tizzano JP pimozide ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသည့်ကြွက်များ၏လီဗာကိုဖိအားပေးခြင်းသည် anhedonia ပါရာဒိုင်းတွင် sucrose ဆုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1987; 27: 67-72 ။ [PubMed]
Guarraci အက်ဖ်အေ, အနိုးယုန်အတွက် differential ကို Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic အာရုံခံ၏ Kapp BS တစ်ခု electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ အမူအကျင့်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1999; 99: 169-179 ။ [PubMed]
Haas HJ, Janssen PAJ neuroleptic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု။ အမ်စတာဒမ်: Elsevier သိပ္ပံထုတ်ဝေ; 1985 ။
ကွဲပြားခြားနားသောအချိုးအစားလိုအပ်ချက်များကိုသက်ရောက်မှု: Hamill S က, Trevitt JT, Nowend KL, Carlson BB, Salamone JD နျူကလိယ dopamine တွေပျက်စီးမှုနှင့်အချိန်-သတ်တိုးတက်သောအချိုးစွမ်းဆောင်ရည် accumbens ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1999; 64: 21-27 ။ [PubMed]
Haney M က, ရပ်ကွက် AS, Foltin RW လူသားများအားဖြင့်သောက်သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် ecopipam ၏ Fischman မဂ္ဂါဝပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု, တစ်ဦးရွေးချယ် dopamine D1 ရန်။ Psychopharmacology ။ 2001; 155: 330-337 ။ [PubMed]
အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ striatum အတွက် Hauber ဒဗလျူ Dopamine လွှတ်ပေးရန်: ယာယီနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရှုထောင့်။ Pharmacopsychiatry ။ 2010; 43: S32-41 ။ [PubMed]
Hauber W က, dopamine ကကမကထပြုခဲ့ Munkel အမ်မော်တော်စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှု: D2 နှင့် adenosine တစ်ဦးက2A နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် caudate-putamen အတွက် receptors ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1997; 323: 127-131 ။ [PubMed]
Hauber W က, Neuscheler P ကို, Nagel J ကို, Muller အီး Catalepsy dopamine D ကိုတစ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်1 သို့မဟုတ်: D2 receptors adenosine တစ်ဦးကတစ်ဦး concomitant ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ခဲ့သည်2A ကြွက်များ၏ caudate putamen အတွက် receptors ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2001; 14: 1287-1293 ။ [PubMed]
Hauber W က, Sommer အက်စ် Prefrontostriatal circuitry အားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချထိန်းညှိ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2009; 10: 2240-2247 ။ [PubMed]
Hengeveld GM က, ဗန် Langevelde က F, Groen က TA, က de Knegt HJ ပေးနိုင်သောအများအပြားအစားအစာမျိုးစိတ်အတွက်မျိုးစုံအရင်းအမြစ်များကိုအဘို့အ foraging ။ အမေရိကန်။ သဘာဝ။ 2009; 17: 102-110 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ်, G, Breton- YA, Conover K ကိုဆုလာဘ်လိုက်ရှာမြှင့်တင်ရန်ကင်းပြုမူဘူးအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အဘယ်အဆင့်မှာ Shizgal P. ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010; 5: e15081 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အဆိုပါကိုက်ညီခြင်းတရား၏ Herrnstein RJ တရားဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1974; 21: 159-164 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Heyman GM အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်စီးပွားရေးချဉ်းကပ်နည်း အရက်သုတေသနနှင့်ကျန်းမာရေး။ 2000; 24: 132-139 ။ [PubMed]
Heyman GM ကစွဲ: ရွေးချယ်မှုတစ်ဦးကရောဂါ။ ကင်းဘရစ်, MA: Harvard University Press မှ, 2009 ။
CIS-flupentixol ၏ Heyman GM က, Monaghan MM, Clody DE အနိမျ့ဆေးများမော်တာစွမ်းဆောင်ရည် attenuate ။ Psychopharmacology ။ 1987; 93: 477-482 ။ [PubMed]
Hillion J ကို, တူးမြောင်း M က, Torvinen M က, Casado V ကို, Scott R ကို, Terasmaa တစ်ဦးက, Hansson တစ်ဦးက, Watson က S, Olah ME, Mallol J ကို, Canela EI, Zoli M က, Agnati LF, Ibañez CF, Lluis ကို C, Franco R ကို, Ferré S က adenosine တစ်ဦး၏, Fuxe K. Coaggregation, cointernalization နှင့် codesensitization2A receptors နှင့် dopamine: D2 receptors ။ ဇီဝဓာတုဗေဒ၏ဂျာနယ်။ 2002; 277: 18091-18097 ။ [PubMed]
မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Hursh SR အပြုအမူဘောဂဗေဒ: တစ်ခုကနိဒါန်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 1993; 33: 165-172 ။ [PubMed]
Hursh SR, Raslear TG, Shurtleff: D, Bauman R ကို, Simmons အယ်လ်အစားအစာဝယ်လိုအားတစ်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1988; 50: 419-440 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ဒေသ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးခြင်းဖြင့်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်တုံ့ပြန်မှုအကြား Ikemoto S က, Panksepp ဂျေ Dissociations ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1996; 110: 331-345 ။ [PubMed]
Ishiwari K ကို Madson LJ, Farrar လေး, Mingote သည် SM, Valenta JP, DiGianvittorio MD, ဖရန့် LE ကော်ရဲရားက M, Hockemeyer J ကို, Muller ကို C, အရွေးချယ် adenosine တစ်ဦး၏ Salamone JD Injection2A ယင်းနျူကလိယသို့ရန် MSX-3 core ကိုကြွက်များတွင် haloperidol အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ locomotor ဖိနှိပ်မှု attenuate accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2007; 178: 190-199 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ishiwari K ကို Weber နဲ့ SM, Mingote S ကကော်ရဲရားက M, Salamone JD Accumbens dopamine နှင့်အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: ကွဲပြားခြားနားသောအချိုးအစားသို့မဟုတ်အင်အားသုံးလိုအပ်ချက်များကိုအားဖြင့်အလုပ် output ကို၏မော်ဂျူ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2004; 151: 83-91 ။ [PubMed]
စိတ်ကျရောဂါအတွက် Jacobson NS, Martell CR, Dimidjian အက်စ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ activation ကုသမှု လက်တွေ့စိတ်ပညာ: သိပ္ပံ & အလေ့အကျင့်။ 2001; 8: 225-270 ။
Jensen J ကို, McIntosh AR, Crawley က AP, Mikulis DJ သမား, Remington, G, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏မျှော်လင့်အတွက် ventral striatum ၏ Kapur အက်စ်တိုက်ရိုက် activation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 40: 1251-1257 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် DF တစ် patchy ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစားအစာရွေးချယ်မှု Collier GH ကယ်လိုရီစည်းမျဉ်းများနှင့်ပုံစံများ: အခြားရွေးချယ်စရာအစားအစာများ၏တန်ဖိုးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်။ ဇီဝကမ္မအပြုအမူ။ 1987; 39: 351-359 ။ [PubMed]
Kaufman LW ၀ မ်းစာအတွက်စားကျက်စားခြင်းနှင့်အစားအစာပုံစံ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1980; 25: 139-141 ။ [PubMed]
Kaufman LW, Collier, G, ဟေးလ် WL တစ်ခု uncaged ပြည်တွင်းကြောင်အတွက် Collins K. အစားအစာကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဘောဇဉ်ပုံစံများ။ ဇီဝကမ္မအပြုအမူ။ 1980; 25: 135-137 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Baldo BA, Pratt WE, Will MJ Corticostriatal-hypothalamic circuitry နှင့်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှု: စွမ်းအင်, အရေးယူနှင့်ဆုလာဘ်၏ပေါင်းစည်းမှု။ ဇီဝကမ္မအပြုအမူ။ 2005; 86: 773-795 ။ [PubMed]
အပြုအမူ၏ယာယီထိန်းချုပ်မှုတွင် Killeen P. ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1975; 82: 89-115 ။
အားဖြည့်များ၏ Killeen PR စနစ်သင်္ချာအခြေခံမူ။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1994; 17: 105-172 ။
Killeen PR စနစ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်, ဂေဟစနစ်များနှင့်စက်ပြင်: ကွဲပြားလှုံ့ဆျောမှု၏အခြေအနေများအောက်တွင်တုံ့ပြန်၏ဒိုင်းနမစ်။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1995; 64: 405-431 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Killeen PR စနစ်, Hanson SJ, Osborne SR arousal: တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည်အဖြစ်၎င်း၏ကမ်ဘာဦးနှင့်ပေါ်ထွန်းခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1978; 85: 571-581 ။ [PubMed]
Koch က M, Schmid တစ်ဦးက, နျူကလိယ၏ Scnhnitzler Hu အခန်းက္ပ conditional ဆုလာဘ်၏ဆာနှင့် Pavlovian Paradigm အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors accumbens ။ Psychopharmacology ။ 2000; 152: 67-73 ။ [PubMed]
Koffarnus MN, Newman က AH, Grundt P ကို, ဆန် KC, တစ်ဦးနှောင့်နှေး-ဝတာဝန်အပေါ်ရွေးချယ် dopaminergic ဒြပ်ပေါင်းများဝုဒ် JH အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 2011; 22: 300-311 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf, Riley SJ သည်နျူကလိယ၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ Smith က SC, Robbins TW အကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်များတွင်နို့တိုက်ကျွေးရေး, locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ကြွဆေး anorexia အပေါ် septi နှင့် olfactory tubercle accumbens ။ နှိုင်းယှဉ်ဇီဝစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1978; 92: 917-927 ။ [PubMed]
မရှိခြင်း CM, ဂျုံးစ် SR, ရောဘတ်, DC IV ကိုကင်းများကအားဖြည့်မယ့်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ် breakpoints အားတိုးမြှင့်လျှော့ locomotor activation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နှင့်နျူကလိယအတွင်းလျှော့ချ dopamine efflux ကြွက်များတွင် shell ကို accumbens ။ Psychopharmacology ။ 2008; 195: 517-525 ။ [PubMed]
Lea seg ဝယ်လိုအား၏စိတ်ပညာနှင့်ဘောဂဗေဒ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1978; 85: 441-466 ။
Levita L ကို, Hare က TA, Voss Hu, ဂလိုဗာ, G, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး DJ သမား, Casey BJ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ bivalent ခြမ်း။ Neuroimage ။ 2009; 44: 1178-1187 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Liao RM, မုဆိုး SC Haloperidol ကြွက်များတွင်အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုကြာချိန်အတွက်အတွင်း-session ကိုတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1990; 36: 199-201 ။ [PubMed]
Liberzon ငါတေလာ SF, Amdur R ကို, Jung TD, Chamberlain KR, Minoshima S က, Koeppe RA, စိတ်ဒဏ်ရာ-related လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် PTSD အတွက်ပုံ LM ဦးနှောက်ကို Activation ။ ဇီဝဗေဒ Psychiatary ။ 1999; 45: 817-826 ။ [PubMed]
က Madden GJ, Bickel wk, Jacobs ကို EA ရွေးချယ်စရာအခြေအနေတွင်ယူနစ်စျေးနှုန်းများ၏စီးပွားရေးအယူအဆသုံးခုခန့်မှန်းချက်။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 2000; 73: 45-64 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Madden GJ၊ Kalman D. ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်စီးကရက်သောက်သုံးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် bupropion ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုတေသန။ 2010; 12: 416-422 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
က Madden GJ, Smethells JR, Ewan EE, ဆွေမျိုးစစ်ကူထိရောက်မှု II ၏အမူအကျင့်-စီးပွားရေးအကဲဖြတ်မှုများ Hursh SR စမ်းသပ်မှု: စီးပွားရေးကိုဖြည့်။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 2007; 88: 355-367 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Piazza PV Pharmacological နျူကလိယလျော့ကျလာလှုံ့ဆော်မှု Marinelli M က, Barrot M ကရှိမုန် H ကို, Oberlander ကို C, Dekeyne တစ်ဦးက, က Le Moal က M, dopamine အဖြစ်အပြုသဘောစစ်ကူပြုမူပေမယ့်နိမ့်စွဲလမ်းအလားအလာရှိနိုင်ပါသည် accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Eurpeoan ဂျာနယ်။ 1998; 10: 3269-3275 ။ [PubMed]
Marinelli S က, Pascucci T က, ဘာနာ, G, Puglisi-Allegra S ကို VTA အတွက် TRPV1 ၏မာကျူရီ NB Activation dopaminergic အာရုံခံ excites နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် chemical- နှင့် noxious-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 864-875 ။ [PubMed]
Martinez RCR, Oliveira AR, Macedo အီး, Molina VA သို့, Brandao ML အာရုံကြောသိပ္ပံပေးစာ။ 2008; 446: 112-116 ။ [PubMed]
မာတင်-Iverson MT, Wilkes: D, အစားအစာနှင့်တန်ချိန်များစွာရိပ်မိအရေအတွက်အပေါ် haloperidol နှင့် D-စိတ်ကြွဆေး၏ Fibiger HC Effect ။ Psychopharamcology ။ 1987; 93: 374-381 ။ [PubMed]
McCullough ld, Salamone JD Anxiogenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ beta ကို-CCE နှင့်အပြည်ပြည်သွား 7142 နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်။ Psychopharmacology ။ 1992; 109 (3): 379-382 ။ [PubMed]
McCullough ld, Sokolowski JD, Salamone JD နျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တစ်ဦးက neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနျဆာပရှောင်ရှားခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ neuroscience ။ 1993; 52 (4): 919-925 ။ [PubMed]
McMillan DE, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏ drive ကို-လျှော့ချရေးအယူအဆဆန့်ကျင်အစောပိုင်းအထောက်အထား Katz JL တည်မြဲသည့်သက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 2002; 163: 251-264 ။ [PubMed]
ပြင်ဆင်ထားအပေါ်လက်ရှိနှင့် pimozide ၏ Mekarski je ပင်မသက်ရောက်မှုများနှင့် Self-stimulation အပြုအမူတွေကိုလေ့လာသင်ယူစွမ်းဆောင်ရည်ဆုချမပေးအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1988; 31: 845-853 ။ [PubMed]
Mingote S က, စာလုံး L ကို, Farrar လေး, Vontell R ကို, Worden LT, အဆို့ CM, ဆိပ်ကမ်း RG, နစ်မြုပ် KS, Bunce JG, Chrobak JJ, Salamone JD နျူကလိယ adenosine A2A receptors အဆိုပါ ventral striatopallidal လမ်းကြောင်းအပေါ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ခေတ္တခဏထိန်းညှိ accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28: 9037-9046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mingote S က, Weber နဲ့ SM, Ishiwari K သည်ကော်ရဲရားက M, Operations အချိန်ဇယားအပေါ် Salamone JD အချိုးနှင့်အချိန်လိုအပ်ချက်များကို: နျူကလိယ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related သက်ရောက်မှု dopamine လျော့ကျ accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2005; 21: 1749-1757 ။ [PubMed]
Mobini S က, ချင်းမိုင်တီဂျေ, Ho MY, Bradshaw CM, အချိန်-သတ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားနှင့်ကြွက်များတွင် locomotor အပြုအမူအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် clozapine, haloperidol, chlorpromazine နှင့် D-စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုများ Szabadi အီးနှိုင်းယှဉ်။ Psychopharmacology ။ 2000; 152: 47-54 ။ [PubMed]
Morelli M က, dopamine နဲ့ adenosine တစ်ဦးကကြားက Pinna အေ Interaction2A ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုအတွက်အခြေခံအနေဖြင့် receptors ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2002; 22: 71-72 ။ [PubMed]
မော်ဂန်: D, Brebner K ကို Lynch WJ, ရောဘတ် DC ကအားဖြည့်များ၏အထူးသဖြင့်သမိုင်းအပြီးကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုအတွက်တိုးတက်စေနိုင်ခြင်း။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 2002; 13: 389-396 ။ [PubMed]
Mott လေး, Nunes EJ, Collins LE, ဆိပ်ကမ်း RG, နစ်မြုပ် KS, Hockemeyer J ကို, Muller အီး, Salamone JD အဆိုပါ adenosine တစ်ဦးက2A ရန် MSX-3 တစ်ဦးသည် T-ဝင်္ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် dopamine ရန် haloperidol ၏သက်ရောက်မှုနောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology ။ 2009; 204: 103-112 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်စကားရပ်ထဲမှာ dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့အဂယက်: Munro LJ, အ ventral tegmental ဧရိယာသို့ quinpirole နှင့် muscimol ၏ Kokkinidis အယ်လ်ပြုတ်ရည်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1997; 746: 231-238 ။ [PubMed]
အဆိုပါ D1 /5ရန် ecopipam ၏နန်း-Vernotica အီး, Donnie EC, Bigelow GE, Walsh SL ထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းများ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှု attenuate ပျက်ကွက်။ Psychopharmacology ။ 2001; 155: 338-347 ။ [PubMed]
Neill DB, တရားမျှတမှု JB နျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic ဂီယာတစ်ဦးအမူအကျင့် function ကိုများအတွက်တစ်ဦးအယူအဆ။ ခုနှစ်တွင်: Chronister RB, Defrance JF, အယ်ဒီတာများ။ နျူကလိယ accumbens ၏ neurobiology ။ Brunswick, ကနေဒါ: Huer Institute က; 1981 ။ (Eds ။ )
Nicola သည် SM အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှုယူဆချက်: နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ပေါင်းစည်းရေးနှင့် cue-တုံ့ပြန်ယူဆချက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ activation အတွက် dopamine accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2010; 30: 16585-16600 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ထို Y ကိုဒေါ် ND, ယောလ: D ဒါယန်း P. ဆေး dopamine: အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့်တုန့်ပြန်သန်စွမ်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 507-520 ။ [PubMed]
Nowend KL, Arizzi M က, Carlson BB, Salamone JD: D1 သို့မဟုတ်: D2 နျူကလိယထဲမှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအဓိကသို့မဟုတ် dorsomedial shell ကို accumbens စားစရာဘို့နှိပ်လီဗာဖိနှိပ်ပေမယ် Chow စားသုံးမှုအတွက်တိုး compensatory စေပါတယ်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 69: 373-382 ။ [PubMed]
Nunes EJ, Randall PA ဆိုပြီး, Santerre JL, AB အား Sager TN ကော်ရဲရားက M, dopamine D1 နှင့် D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ချို့ယွင်းအပေါ်ရွေးချယ် adenosine ရန်၏ Salamone JD Differential ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2010; 170: 268-280 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pardo M က, လိုပက်ဇ်-Cruz L ကို, Valverde အို Ledent ကို C, Baqi Y ကို, Muller အီး, Salamone JD (စာစောင်များအတွက် submitted) Adenosine A2A အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်ကြွက်တွေမှာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် dopamine D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏သက်ရောက်မှု attenuate ။ [PubMed]
Pardo M က, Randall PA ဆိုပြီး, Nunes EJ, လိုပက်ဇ်-Cruz L ကို, Janniere S ကကော်ရဲရားက M, dopamine ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ Salamone JD Effect တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုတာဝန်အစာကျွေးမယ့်တိုးတက်သောအချိုး / Chow အပေါ်တုံ့ပြန်ကြွက်များတွင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာ။ neuroscience အစည်းအဝေးအစီအစဉျ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံ, အွန်လိုင်းများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း; 2011 ။
ပါကင်ဂျာ Dalley JW, Cardinal RN, Bamford တစ်ဦးက, Fehnert B, Lachenal, G, Rudarakanchana N ကို, Halkerston KM, Robbins TW, Everitt BJ နျူကလိယ dopamine လျော့ကျဝယ်ယူခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ် Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်ဦးစလုံးချို့ယွင်း accumbens: mesoaccumbens dopamine function ကိုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137: 149-163 ။ [PubMed]
Paterson NE, Balci က F, ကမ့်ဘဲလ်ဦး, Olivier BE, Hanania တီအဆိုပါသုံးဆ reuptake inhibitor DOV216,303 ကြောင့် dopamine reuptake တားစီးဖွယ်ရှိနိမ့်မှုနှုန်း 72-ဒုတိယတုံ့ပြန် assay ၏ differential ကိုအားဖြည့်သည့်အတွက်ကန့်သတ်လက္ခဏာတူသောဂုဏ်သတ္တိများထားပါတယ်။ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်။ 2010 ။ အွန်လိုင်း။ [PubMed]
ပြင်းထန် hyperarousal ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ထကြွလွယ်သောကျူးကျော်အတူ posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါလူနာကဦးနှောက်ကို Activation အတွက် Pavic အယ်လ် ALTER ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပမော်ကွန်း။ 2003; 253: 80-83 ။ [PubMed]
ဖန် KL, တေလာ SF, ဝလေ RC, Ho SH, Britton JC, စိတ်ခံစားမှု salience ၏တစ်ဦးချင်းစီ ratings ၏ Liberzon ဗြဲဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု: တစ်ရုံးတင်စစ်ဆေး-related fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2004; 21: 768-780 ။ [PubMed]
Phillips က PE, ဝေါ်လ်တန် ME, Jhou TC utility ကိုတွက်ချက်: mesolimbic dopamine ခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် preclinical သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 483-495 ။ [PubMed]
Pinna A၊ Wardas J၊ Simola N, Morelli M. ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုအတွက်ကုထုံးသစ်များ - adenosine A2A အဲဒီ receptor ရန်။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2005; 77: 3259-3267 ။ [PubMed]
Pitt သည် SM, နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် locomotor အပြုအမူအပေါ်: D (1) / D ကို (2) အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ Horvitz JC အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2000; 65: 433-438 ။ [PubMed]
Pizzagalli DA schizophrenia အတွက်အဆိုပါ "anhedonia ဝိရောဓိ": အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ ဟားဗတ်။ 2010; 67: 899-901 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပင်ကိုယ်မူလအပြုအမူဥပဒေများခါနီး Premack ဃ။ ကျွန်မ: အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1959; 66: 219-33 ။ [PubMed]
Pruessner JC, ရှန်ပိန်က F, Meaney MJ တစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အစောပိုင်းဘဝမိခင်စောင့်ရှောက်မှုက၎င်း၏ဆက်ဆံရေးတုန့်ပြန် Dagher အေ Dopamine လွှတ်ပေးရန်: [11C] raclopride သုံးပြီး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 24: 2825-2831 ။ [PubMed]
စွဲလမ်း၏အမူအကျင့်လေ့လာမှုမှာ Rachlin အိပ်ချ်စီးပွားရေးသဘောတရားများ။ ခုနှစ်တွင်: Vuchinich RE, ဟဲလ် N ကို, အယ်ဒီတာများ။ ရှေးခယျြမှု, အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒနှင့်စွဲလမ်း။ အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: Elsevier; 2003 ။ စစ။ 129-149 ။ (Eds ။ )
Randall PA ဆိုပြီး, Nunes EJ, Janniere SL, အဆို့ CM, Farrar လေး, Sager TN, Baqi Y ကို, Hockemeyer J ကို, Muller အီး, Operations အပြုအမူအပေါ် adenosine ရန်၏ Salamone JD စိတ်ကြွဆေးသက်ရောက်မှု: ရွေးချယ် A2A ၏ differential ကိုလုပ်ရပ်များနှင့် A1 ရန်။ Psychopharmacology ။ 2011; 216: 173-186 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Randall PA ဆိုပြီး, Pardo M က, Nunes EJ, လိုပက်ဇ်-Cruz L ကို, Blodgett တစ်ဦးက, Lingiah K ကို Leser ကို C, Vemuri VK, Makriyannis တစ်ဦးက, Baqi Y ကို, Muller အီးကော်ရဲရားက M, Salamone JD ကြိုးပမ်းမှု-related ရွေးချယ်မှုအပြုအမူတစ်ခုတိုးတက်သောအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ် အချိုး / Chow နို့တိုက်ကျွေးရေးတာဝန်: DA D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, adenosine A2A ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း, cannabinoid CB1 antgonism နှင့် Pre-နို့တိုက်ကျွေး။ neuroscience အစည်းအဝေးအစီအစဉျ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံ, အွန်လိုင်းများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း; 2011 ။
Rick JH, Horvitz JC, ဗာလစံ PD Dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်း differential အမူအကျင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 120: 488-492 ။ [PubMed]
Robbins TW, Everitt BJ activation အတွက် mesencephalic dopamine တစ်အခန်းကဏ္ဍ: Berridge အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် (2006) Psychopharmacology ။ 2007; 191: 433-437 ။ [PubMed]
Robbins TW, အ mesolimbic dopamine စနစ်၏တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းခံရအပြုအမူ၏ Koob gf ရွေးချယ်ပြတ်တောက်။ သဘာဝ။ 1980; 285: 409-412 ။ [PubMed]
Robbins TW, ရောဘတ်, DC, D-စိတ်ကြွဆေးနှင့် apomorphine ၏ Koob gf အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာနျူကလိယ accumbens ၏ 6-hydroxydopamine-သွေးဆောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်များတွင်အော်ပရေတာအပြုအမူနှင့်အချိန်ဇယားကို-သွေးဆောင်လျက်အပေါ်သို့။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1983; 224: 662-673 ။ [PubMed]
Roitman MF, Stuber GD, Phillips က PE, Wightman RM, Carelli RM Dopamine အစားအစာရှာတဲ့ subsecond modulator တွေကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 24: 1265-1271 ။ [PubMed]
Rolls ET, Rolls BJ, ကယ်လီ PH သည်, Shaw ကစင်ကာပူဒေါ်လာ, Wood က RJ, Dale R. Self-stimulation ၏ဆွေမျိုးကို attenuation, အစာစားခြင်းနှင့် dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သောက်သုံးရေ။ Psychopharmacology ။ 1974; 38: 219-230 ။ [PubMed]
Rusk IN, Cooper က SJ ရွေးချယ် D1 နှင့် D2 ရန်၏ parametric လေ့လာမှုများ: အစာစားချင်စိတ်များနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 1994; 5: 615-622 ။ [PubMed]
ဆာအပြုအမူတွေအပေါ် haloperidol နှင့်မျိုးသုဉ်း၏ Salamone JD အမျိုးမျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1986; 88: 18-23 ။ [PubMed]
အစာစားချင်စိတ်ဆာပအပြုအမူတွေအပေါ် neuroleptic မူးယစ်ဆေး Salamone JD အဆိုပါလုပ်ရပ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Iversen ll, Iversen SD, Snyder SH, အယ်ဒီတာများ။ psychopharmacology ၏လက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်: Plenum စာနယ်ဇင်း; 1987 ။ စစ။ 575-608 ။ (Eds ။ )
အချိန်ဇယားကိုသွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် haloperidol ၏ဆိုးကျိုးများ, အစာကျွေးခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် foraging: လှုံ့ဆျောမှု၏ Active ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ Salamone JD Dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychobiology ။ 1988; 16: 196-206 ။
Salamone JD striatal နှင့် accumbens dopamine ၏ရှုပ်ထွေးသောမော်တာများနှင့် sensorimotor လုပ်ဆောင်ချက်များကို: ဆာပအပြုအမူလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1992; 107 ((2-3)): 160-74 ။ [PubMed]
Salamone JD နျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုအတွက် dopamine accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1994; 61: 117-133 ။ [PubMed]
Salamone JD လှုံ့ဆျောမှုများ၏အမူအကျင့် neurochemistry: နျူကလိယ၏ dynamic လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများအတွက်အတိုင်းအတာများနှင့်အယူအဆရေးရာကိစ္စများ dopamine accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံနည်းလမ်းများ၏ဂျာနယ်။ 1996; 64: 137-149 ။ [PubMed]
Salamone JD ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို '' ဆုလာဘ် '' ကိုအသုံးပြုသည်သူနောက်ဆုံးလူတစ်ဦးမီးထွက် turn ကျေးဇူးပြုပြီးတော်မူမည်လော အားဖြည့်, သင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်မှတ်ချက်။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2006; 11 (1): 43-44 ။ [PubMed]
နျူကလိယ၏ Salamone JD ပါဝင်ပတ်သက်မှုအမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက် dopamine accumbens ။ ခုနှစ်တွင်: Iversen ll, Iversen SD, Dunnett SB, Bjorkland တစ်ဦးက, အယ်ဒီတာများ။ Dopamine လက်စွဲစာအုပ်။ အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2010a ။ (Eds ။ )
Salamone JD မော်တာ function ကိုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ In: Koob, Le Moal M, Thompson RF, အယ်ဒီတာများ။ အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံစွယ်စုံကျမ်း၊ အောက်စ်ဖို့။ (စစ ၂၆၇-၂၇၆) ။ Academic Press; 3b ။ (Eds ။ )
Neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ: Salamone JD, Aberman je, Sokolowski JD, ဝမ်းကွဲက MS နျူကလိယတုံ့ပြန်၏ dopamine နဲ့နှုန်းက accumbens ။ Psychobiology ။ 1999; 27: 236-47 ။
Salamone JD, Arizzi M က, Sandoval MD, Cervone KM, Aberman je Dopamine antagonsts တုံ့ပြန်မှုခွဲဝေပြောင်းလဲပေမယ့်ကြွက်များတွင်စားစရာဘို့အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းကြဘူး: တစ်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ် SKF 83566 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြား Contrast, raclopride နှင့် fenfluramine ။ Psychopharmacology ။ 2002; 160: 371-380 ။ [PubMed]
Salamone JD, Betz AJ, Ishiwari K ကို Felsted J ကို, Madson L ကို, Mirante က B, Clark က K ကိုစာလုံး L ကို, Korbey S က, Sager TN, Hockemeyer J ကို, adenosine A2A ရန်၏ Muller အီး Tremorolytic သက်ရောက်မှု: Parkinson များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Biosciences အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2008; 13: 3594-3605 ။ [PubMed]
Salamone JD, အားဖြည့်များ၏ကော်ရဲရားအမ်လှုံ့ဆျောမှုအမြင်များ: နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့သက်ရောက်မှုတွေ dopamine accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137 ((1-2)): 3-25 ။ [PubMed]
Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Farrar တစ်ဦးက, နျူကလိယ၏ Mingote သည် SM ကြိုးပမ်းမှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine နဲ့ဆက်စပ် forebrain ဆားကစ် accumbens ။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 461-482 ။ [PubMed]
Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Farrar လေး, Nunes EJ, အားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချထိန်းညှိဦးနှောက် circuitry အတွက် dopamine-adenosine interaction က၏ Collins LE အခန်းက္ပ: လှုံ့ဆျောမှု၏ရောဂါဗေဒရှုထောင့်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ အနာဂတ် Neurology ။ 2010; 5: 377-392 ။
သဘာဝကလှုံ့ဆျောမှု, Psychiatry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လေ့လာမှုများအဘို့အဂယက်: Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Mingote S က, Weber နဲ့ SM နျူကလိယ dopamine နှင့်အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏စည်းမျဉ်း accumbens ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 2003; 305: 1-8 ။ [PubMed]
Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Mingote သည် SM, Weber နဲ့ SM အကျိုးကိုယူဆချက်အပြင်: နျူကလိယ၏အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens ။ ဆေးဝါးဗေဒအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2005; 5: 34-41 ။ [PubMed]
စိတ်ကျရောဂါအတွက်နှေးကွေး anergia နှင့် psychomotor ကိုနားလည်ဘို့ဂယက်: Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Mingote သည် SM, Weber နဲ့ SM, Farrar AM နျူကလိယ dopamine နဲ့အမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပါဝင်နေတဲ့ forebrain circuitry accumbens ။ လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2006; 2: 267-280 ။
Salamone JD, ဝမ်းကွဲက MS, Bucher အက်စ် Anhedonia သို့မဟုတ် anergia? haloperidol နှင့်နျူကလိယ၏ဆိုးကျိုးများတစ်ဦးသည် T-ဝင်္ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်နျဆာပတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေးအပေါ် dopamine လျော့ကျ accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1994; 65: 221-229 ။ [PubMed]
Salamone JD တစ်ဦးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းလီဗာကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် haloperidol, clozapine နှင့် thioridazine ၏ဝမ်းကွဲက MS, Maio ကို C, ချန်ပီယံ M က, Turski T က, Kovach ဂျေအမျိုးမျိုးအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology ။ 1996; 125: 105-112 ။ [PubMed]
Salamone JD, ဝမ်းကွဲက MS, နျူကလိယ၏ Snyder BJ အပြုအမူလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens: အ anhedonia အယူအဆနှင့်အတူပင်ကိုယ်မူလနှင့်အယူအဆရေးရာပြဿနာများကို။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1997; 21: 341-359 ။ [PubMed]
Salamone JD, Farrar လေး, စာလုံး L ကို, Patel က V ကို, Schlar DE, Nunes EJ, Collins LE, dopamine D1 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related သက်ရောက်မှုအပေါ် adenosine A2 နှင့် A2A ရန်၏ Sager TN Differential လုပ်ရပ်တွေကို။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2009; 201: 216-222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Salamone JD, Ishiwari K, Betz AJ, Farrar AM, Mingote SM, Font L, Hockemeyer J, Müller CE, Correa အမ်ဒိုနိုမင်း / adenosine အပြန်အလှန်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ပါကင်ဆန်စနစ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေဆက်စပ်မှု။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ။ 2008; 14: S130-S134 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Salamone JD, Kurth P ကို, McCullough ld, Sokolowski JD နျူကလိယ၏သက်ရောက်မှုတုံ့ပြန်စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်အော်ပရေတာပေါ် dopamine လျော့ကျ accumbens: သုဉ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူခြားနားနေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1995; 50: 437-443 ။ [PubMed]
Salamone JD, Kurth PA ဆိုပြီး, McCullough ld, Sokolowski JD, ဝမ်းကွဲက MS တုံ့ပြန်မှုစတင်များတွင်ဦးနှောက် dopamine များ၏အခန်းကဏ္ဍ: ဆာပတုံ့ပြန်၏ဒေသခံမှုနှုန်းအပေါ် haloperidol ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဒေသတွင်းတိကျတဲ့ dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1993; 628: 218-226 ။ [PubMed]
Salamone JD, မာဟန် K ကိုရော်ဂျာအက်စ် Ventrolateral striatal dopamine လျော့ကျကြွက်များတွင်တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အစားအစာကိုင်တွယ်အယှက်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1993; 44: 605-610 ။ [PubMed]
Salamone JD, Steinpreis RE, McCullough ld, စမစ် P ကို, Grebel: D, မာဟန် K. Haloperidol နှင့်နျူကလိယတို့စားစရာဘို့နှိပ် dopamine လျော့ကျဖိနှိပ်လီဗာ accumbens သို့သော်ဝတ္ထုအစားအစာရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်အခမဲ့အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်။ Psychopharmacology ။ 1991; 104: 515-521 ။ [PubMed]
Salamone JD, Wisniecki တစ်ဦးက, Carlson BB ကော်ရဲရားအမ်နျူကလိယ dopamine လျော့ကျ accumbens မြင့်မားသော fixed အချိုးလိုအပ်ချက်များတိရိစ္ဆာန်များအလွန်အမင်းထိခိုက်မခံစေပေမယ့်မူလတန်းအစားအစာအားဖြည့်အယှက်မပေးပါဘူး။ neuroscience ။ 2001; 105: 863-870 ။ [PubMed]
Sanchis-Segura ကို C, မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်စွဲလမ်းအင်္ဂါရပ်များ Spanagel R. အပြုအမူအကဲဖြတ်: ခြုံငုံသုံးသပ်။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2006; 11: 2-38 ။ [PubMed]
Sarchiapone M က, Carly V ကို, Camardese, G, Cuomo ကို C, Di Guida: D, Calgagni ML, Focacci ကို C, anhedonia နှင့်အတူစိတ်ဓာတ်လူနာအတွက် binding De Riso အက်စ် Dopamine Transporter ။ စိတ်ရောဂါသုတေသန: Neuroimaging ။ 2006; 147: 243-248 ။ [PubMed]
Schiffmann SN, Jacobs အို Vanderhaeghen JJ Striatal ကန့်သတ် adenosine တစ်ဦးက2A တစ်ဦး situ အတွက် Hybrid histochemistry လေ့လာမှု: အဲဒီ receptor (RDC8) enkephalin အားဖြင့်သော်လည်းမပစ္စည်းဥစ္စာ P ကိုအာရုံခံဖော်ပြနေသည်။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 1991; 57: 1062-1071 ။ [PubMed]
Schmelzeis MC, Mittleman G. အဒီ hippocampus နှင့်ဆုလာဘ်: တိုးတက်သော-အချိုးတုံ့ပြန်အပေါ် hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1996; 110: 1049-1066 ။ [PubMed]
Schoenbaum, G, နျူကလိယ accumbens ၏ Setlow ခကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဆန္ဒရှိရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူနှောင့်အယှက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23 (30): 9833-9841 ။ [PubMed]
ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာ Schultz ဒဗလျူအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2007a; 30: 259-288 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူအပြုအမူ dopamine အချက်ပြမှုများ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2007b; 30: 203-210 ။ [PubMed]
Schwab သည် RS Akinesia paradoxica ။ electroencephalography နှင့်လက်တွေ့ Neurophysiology ။ 1972; 31: 87-92 ။
Schweimer J ကို, အ anterior cingulate cortex အတွက် Hauber ဒဗလျူ Dopamine D1 receptors အားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချထိန်းညှိ။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ။ 2006; 13: 777-782 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စီဂိုဗီယာ KN ကော်ရဲရားက M, Salamone JD နျူကလိယအတွက် phasic အပြောင်းအလဲများကိုနှေးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးဝယ်ယူစဉ်က dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ neuroscience ။ 2011; 196: 188-198 ။ [PubMed]
စုပ် KS, Vemuri VK, Olszewska T က, Makriyannis တစ်ဦးက, Salamone JD Cannabinoid CB1 ရန်နှင့် dopamine ရန်အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်တုန့်ပြန်ခွဲဝေခြင်းနှင့်အားထုတ်မှု-ဆက်စပ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်။ Psychopharmacology ။ 2008; 196: 565-574 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Skinner BF သိပ္ပံနှင့်လူ့အပြုအမူ။ နယူးယောက်: အေ; 1953 ။
Skjoldager P ကို, Pierre ၏ PJ, Mittlman G. အစစ်ကူပြင်းအားနှင့်တိုးတက်သောအချိုးတုံ့ပြန်: တိုးမြှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, prefeeding နှင့်မျိုးသုဉ်း။ သင်ယူပြီးတက်ကြွတဲ့။ 1993; 24: 303-343 ။
Sokolowski JD, Conlan AN, Salamone JD နျူကလိယ၏တစ်ဦးက microdialysis လေ့လာမှုကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာကာလအတွင်း core နဲ့ shell ကို dopamine accumbens ။ neuroscience ။ 1998; 86: 1001-1009 ။ [PubMed]
Sokolowski JD, Salamone JD နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍလီဗာနှိပ်ပြီးတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေအတွက် dopamine accumbens: 6-OHDA သက်ရောက်မှု core နဲ့ dorsomedial shell ကိုသို့ထိုးသွင်း။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒအပြုအမူ။ 1998; 59: 557-566 ။ [PubMed]
Spivak KJ, အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် pimozide ၏ Amit Z. အကျိုးသက်ရောက်မှု: သုဉ်းနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသက်ရောက်မှု၏ထပ်တူထပ်မျှ။ ဇီဝကမ္မအပြုအမူ။ 1986; 36: 457-463 ။ [PubMed]
သတ်မှလိုက်လျောညီထွေအဖြစ် Staddon ယေ operating အပြုအမူ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: အထွေထွေ။ 1979; 108: 48-67 ။
Staddon ယေ, Ettenger RH အသင်ယူခြင်း: သပ္ပါယ်အပြုအမူများ၏အခြေခံမူမှတစ်ဦးနိဒါန်း။ နယူးယောက်: Harcourt Brace Jovanovitch; 1989 ။
Stahl သည် SM စွမ်းအင်နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ psychopharmacology ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002; 63: 7-8 ။ [PubMed]
Stewart က WJ တိုးတက်ရေးပါတီအားဖြည့်အချိန်ဇယား: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုနှင့်အကဲဖြတ်။ စိတ်ပညာ၏သြစတြေးလျဂျာနယ်။ 1975; 27: 9-22 ။
striatal adenosine တစ်ဦး၏ Svenningsson P ကို, Le Moines, C, Fisone, G, Fredholm BB ဖြန့်ဖြူး, ဇီဝဓါတုဗေဒနဲ့ function ကို2A receptors ။ Neurobiology အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 1999; 59: 355-396 ။ [PubMed]
Takahashi RN, Pamplona အက်ဖ်အေ, သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Prediger RD Adenosine အဲဒီ receptor ရန်: တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ Bioscience အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2008; 13: 2614-2632 ။ [PubMed]
Tapp JT လုပ်ဆောင်ချက်, reactivity ကိုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြုအမူ-directing ဂုဏ်သတ္တိများ။ ခုနှစ်တွင်: Tapp JT, အယ်ဒီတာ။ အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အပြုအမူ။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1969 ။ စစ။ 387-416 ။ (Ed က။ )
Timberlake ဒဗလျူအပြုအမူစနစ်များနှင့်အားဖြည့်: အရေးပါသောချဉ်းကပ်။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1993; 60: 105-128 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Treadway MT, Zald DH စိတ်ကျရောဂါအတွက် anhedonia ပြန်လည်: Translation မှ neuroscience ကနေသင်ခန်းစာ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2011; 35: 537-555 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝယ်လိုအားခါးဆစ်, အလုပ်-rate ကို functions များ, နှင့်ချဲ့ထွင်မှုလမ်းကြောင်းကိုသုံးပြီးစစ်ကူများအတွက် preference ကိုအကဲဖြတ် Tustin RD ။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1995; 64: 313-329 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ungerstedt U. Adipsia နှင့် nigro-striatal dopamine စနစ်၏ 6-hydroxydopamine သွေးဆောင်ယိုယွင်းပြီးနောက် aphagia ။ Acta Physiologica ယမ် Supplementum ။ 1971; 367: 95-122 ။ [PubMed]
ဗန်တွင်း Bos R ကို, ဗန် der Harst J ကို, Jonkman S က, Schilders M က, Spruijt ခသည်အထိတစ်ပြည်တွင်းရေးအဆင့်စံနှုန်းအတိုင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်အကဲဖြတ်ရန်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2006; 171: 350-354 ။ [PubMed]
Venugopalan VV, Casey KF, O'Hara C, O'Loughlin J, Benkelfat C, Fellows LK, Leyton M. Acute phenylalanine / tyrosine လျော့နည်းမှုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏စွဲလမ်းမှုအဆင့်ဆင့်တွင်လှုံ့ဆော်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2011; 36: 2469-2476 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vezina P ကို, Lorraine DS, အာနိုး GM က, Austin JD, midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကို၏ Suto N. အသိမြှစိတ်ကြွဆေး၏လိုက်စားအားပေးအားမြှောက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 4654-4662 ။ [PubMed]
Vuchinich RE, ဟဲလ် N. နိဒါန်း: ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲအပေါ်အပြုအမူစီးပွားရေးရှုထောင့်၏အကျဉ်းချုပ်။ ခုနှစ်တွင်: Vuchinich RE, ဟဲလ် N ကို, အယ်ဒီတာများ။ ရှေးခယျြမှု, အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒနှင့်စွဲလမ်း။ အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: Elsevier; 2003 ။ စစ။ 1-31 ။ (Eds ။ )
Wachtel SR, Ortengren တစ်ဦးက, က de ကျေးအိပ်ချ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်စိတ်ကြွဆေးမှပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုအပေါ်စူးရှ haloperidol သို့မဟုတ် risperidone ၏ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2002; 68: 23-33 ။ [PubMed]
Wade TR, က de ကျေး H ကို, dopaminergic မူးယစ်ဆေး Richards JB အကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတစ်ခုတိုင်းတာမှုအဖြစ်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်ပေါ်မှာ။ Psychopharmacology ။ 2000; 150: 90-101 ။ [PubMed]
Wakabayashi KT, Fields HL, နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ Nicola သည် SM Dissociation ဆုချ-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှတွေကိုတုံ့ပြန်နှင့်ဆုလာဘ်ကိုစောင့်ဆိုင်းအတွက် dopamine accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2004; 154: 19-30 ။ [PubMed]
Wallace က M, အဆိုတော်, G, Finlay J ကို, Gibson အက်စ်ဟာနျူကလိယ၏ 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာကြွက်များတွင်အချိန်ဇယား-သွေးဆောင်အရက်သောက်, wheelrunning နှင့် corticosterone အဆင့်ဆင့်အပေါ် septum accumbens ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1983; 18: 129-136 ။ [PubMed]
ဝေါ်လ်တန် ME, Bannerman DM, Alterescu K သည်, အားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်များအကဲဖြတ်များအတွက် anterior cingulated ၏ medial တိုကျရိုကျ cortex အတွင်း Rushworth MFS Functional အထူးပြု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23: 6475-6479 ။ [PubMed]
ဝေါ်လ်တန် ME, Bannerman DM, Rushworth MF အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ကြွက် medial တိုကျရိုကျ cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 10996-11003 ။ [PubMed]
ဝေါ်လ်တန် ME, Kennerley SW, Bannerman DM, Phillips က PE, Rushworth MF အလုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများတက်အလေးချိန်: အားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။ အာရုံကြောကွန်ယက်။ 2006; 19: 1302-1314 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရပ်ကွက် SJ, မော်ဂန်: D, ကြွက်များတွင်တိုးတက်သောအချိုးနဲ့ရှေးခယျြမှုအချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်းနှင့်ကိုကင်း / ဘိန်းဖြူပေါင်းစပ်၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ Roberts သည် DC ကနှိုင်းယှဉ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 286-295 ။ [PubMed]
Wardas J ကို, Konieczny J ကို, Lorenc-Koci အီး SCH 58261 တစ်ဦးတစ်ဦးက2A adenosine receptor ရန်, ကြွက်များတွင် parkinsonian ကဲ့သို့ကြွက်သားကျောမှု counteracts ။ synapses ။ 2001; 41: 160-171 ။ [PubMed]
Weinstock LM, Munroe MK, atypical စိတ်ကျရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက် Miller က iw အပြုအမူကို Activation: တစ်ရှေ့ပြေးပွင့်လင်းရုံးတင်စစ်ဆေး။ အပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံ။ 2011; 35: 403-424 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Williams BA အင်အားဖြည့်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းစွမ်းအား။ ခုနှစ်တွင်: Atkinson RC, Herrnstein RJ, Lindsey, G, Luce RD, အယ်ဒီတာများ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ Stevens '' လက်စွဲစာအုပ်, vol ။ ၂။ နယူးယောက် - John Wiley နှင့် Sons;2စစ။ 1988-167 ။ (Eds ။ )
Willner P ကို, Chawala K ကို Sampson: D, Sophokleous S က, pimozide pretreatment, မျိုးသုဉ်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်နို့တိုက်ကျွေးရေးအကြား function ကိုညီမျှ၏မပ်စ်ကတ် R. စမ်းသပ်မှု။ Psychopharmacology ။ 1988; 95: 423-426 ။ [PubMed]
Winstanley, CA, Theobald DEH, Dalley JW, ကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုများထိန်းချုပ် serotonin နဲ့ dopamine အကြား Robbins TW ဆက်သွယ်မှု: ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များအတွက်ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 669-682 ။ [PubMed]
Wirtshafter: D, asin Ke Haloperidol နှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း task ထဲမှာနှေးကွေးတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးပုံစံများထုတ်လုပ် nonreinforcement ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1985; 22: 661-663 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက် Reviews ။ 2004; 5: 483-494 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Spindler J ကို, က de ကျေး H ကိုကြွက်အတွက် Gerberg GJ Neuroleptic-သွေးဆောင် "anhedonia": အစားအစာ pimozide လုပ်ကွက်ဆုလာဘ်အရည်အသွေးကို။ သိပ္ပံ။ 1978; 201: 262-264 ။ [PubMed]
Woolverton WL, အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားကို အသုံးပြု. မျောက်တွေကိုနှစ်ခု dopamine D2 တူသောအဲဒီ receptor agonists ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှု၏ Ranaldi R. နှိုင်းယှဉ်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 72: 803-809 ။ [PubMed]
Worden LT, Shahriari M က, Farrar လေး, နစ်မြုပ် KS, Hockemeyer J ကို, Muller ကို C, Salamone JD အဆိုပါ adenosine တစ်ဦးက2A ရန် MSX-3 dopamine ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related သက်ရောက်မှုနောက်ကြောင်းပြန်: D1 နှင့် D2 မိသားစုရန်နှင့်အတူ differential ကိုအပြန်အလှန်။ Psychopharmacology ။ 2009; 203: 489-499 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wyvell CL, ယခင်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့် Berridge KC ယ့ာင်း: တိုးမြှင့် cue-ဖြစ်ပေါ် sucrose ဆုလာဘ်အတွက် "လို" ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21: 7831-7840 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Ostlund SB, Balleine BW ဆုကြေး-guided နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ကျော်လွန်သင်ယူခြင်း accumbens: cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များ၏သမာဓိလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2008; 28: 1437-1448 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကြွက်များတွင် 1 မိ microdialysis ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုများ: လူငယ် AM လေးနျူကလိယအတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်ခြွင်းချက်မရှိခြင်းနှင့်အေးစက် aversive လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံနည်းလမ်းများဂျာနယ်။ 2004; 138: 57-63 ။ [PubMed]